३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू – Word of Truth, Nepal
February 10, 2020 /in ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू /by Pradesh Shrestha
४) हामीलाई एकैचोटी सदाका निम्ति सुम्पिएको “विश्वास” (सत्यताको सँगालो) का लागि हामीले यत्‍नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्दै यहूदाले हामीलाई अर्ती दिएका छन् (यहूदा ३)। उक्त सत्यताको सँगालो एकैचोटी सदाका निम्ति पहिलो शताब्दीका पवित्र जनहरूलाई सुम्पिएको थियो जुनचाहिँ लिखित रूपमा आज हाम्रो बाइबलमा पाइन्छ। हामीलाई योभन्दा बढ्ता अरू के चाहियो र?
५) पूर्णतामा आइपुगेको परमेश्वरको प्रकाशको पुछारमा अन्तिम “पूर्णविराम चिन्ह” ठड्याउँदै यूहन्नाले यस पुस्तकमा केही नथप्न, केही नघटाउन हामीलाई चेताउनी दिएका छन् (प्रकाश २२:१८-१९)। जुन घडी यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकको अन्तिम वाक्यलाई लेखी भ्याए, त्यही घडी बाइबल (६६ आधिकारिक पुस्तकहरू) पूरा भयो। हामीलाई योभन्दा बढ्ता अरू के चाहियो र? पवित्र शास्त्रको आधिकारिक सँगालो (canon of Scripture) बन्द भएको छ, र जुन कुरालाई परमेश्वरले बन्द गर्नुभयो, कुनै मानिसले नखोलोस्। “बाइबल नै पर्याप्‍त छ!” भनेर परमेश्वरले भन्नुभइसकेपछि, मानिसले “हामीलाई अझ अरू चाहियो!” भनी नभनोस्।
एक समय ओरल रबर्टस्‌ले आफूले ९००-फुट येशूसित बातचित गरेको दाबी गरे जुन “दर्शन” को कथाले गर्दा उनका अनुयायीहरूबाट लाखौं डलरको अनुदान सङ्कलन भयो जसबाट उनले आफ्नो ६०-तले रोग-अनुसन्धान क्लिनिक र ३०-तले अस्पताल निर्माण गरे। पछि गएर रबर्ट्‌सले आफूले परमेश्वरबाट अर्को सूचना प्राप्‍त गरेको दाबी गरे। यस पटक चाहिँ मानिसहरूले ओरल रबर्ट्‌सलाई उनको ८० लाख डलर अनुदान उठाउने दौडानलाई पूरा गर्न ४५ लाख डलर “शीघ्र रकम” उपलब्ध गरियोस् भन्ने परमेश्वरले चाहनुभएको छ भन्ने कुरा आयो। यति रकम उनले नउठाएको खण्डमा परमेश्वरले उनलाई स्वर्गे घरमा झिकाउनुहुने अरे। फ्लोरिडाको घोडे-दौड रङ्घशाला (एक किसिमको जुवाको खेल) का मालिक जेरी कलिन्स्‌ले बल्लतल्ल अन्तिम १३ लाख डलर बुझाएपछि, उनको छुटकाराको दामको मूल्य पूरा भयो, र भविष्यमा यस्तै नयाँ-नयाँ आकर्षक चालबाजीहरू आविष्कार गर्नलाई ओरलको जीवनमा म्याद थपियो।
डाक्टर कोलेट, एक चिकित्सक, झण्डै ५० वर्षसम्म दक्षिण अमेरिकाको आमाजोन खाडी (Amazon River Basin) का बासिन्दाहरूका बीच काम गर्नुभयो। १९८२ मा आफू साँढे पाँच दिनसम्म स्वर्गमा लगिएको भन्ने उनको दाबी छ। उनले परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा, एलिया, एलिशा, अब्राहाम, मोशा, पावल र अरूसित कुराकानी गरे अरे। उनले पवित्र जनहरूका दरवारहरू र हाल निर्माणाधीन भवनहरूको अवलोकन गरे अरे। उनी शहरको जगभन्दा ७०० माइल माथि रहेको “आफ्नो” दरवारमा लगिए अरे। उनले स्वर्गको प्रत्येक तहको सफर गरे र तिनका विभिन्न विभागहरू र क्रियाकलापहरूको अवलोकन गरे अरे। येशूले उनीसित पृथ्वीमा चाँडै हुन लागेको घटनाहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो अरे—अर्थात् इजकिएल ३८ को युद्ध, र्याप्‍चर र हार्मागेडोन (Armageddon) को बारेमा। आफ्नो सेवारत क्षेत्रबाट विदा लिई आफूले देखेका र सुनेका कुराहरूको घोषणा गर्नू भन्ने निर्देशनसहित आफू पृथ्वीमा फिर्ता पठाइए अरे।
एक सय डलरको अनुदान दिएबापत उक्त स्वर्ग-यात्राको भिडियो प्रस्तुति प्राप्‍त गर्न सकिन्छ। यस भिडियोको विज्ञापनमा यसरी लेखिएको पाइयो, “डाक्टर कोलेट पावलजस्तै तेश्रो स्वर्गमा उठाइनुभएको थियो। फरक यतिमा छ, पावललाई आफूले देखेका र सुनेका कुराहरू बताउन अनुमति दिइएन तर त्यसको झण्डै २००० वर्ष पछाडि डाक्टर कोलेटलाई भने सो गर्न आदेश दिइयो।” यसलाई २ कोरिन्थी १२:१-१० सित तुलना गर्नुहोस्। स्वर्गको यात्रा गरेको वा स्वर्गको दर्शनहरू देखेको दाबी अरू थुप्रैले गर्दै छन्। सिओल, कोरियाका “संसारको सबभन्दा ठूलो मण्डलीका पास्टर” डाक्टर पावल योङ्गि चो (Dr. Paul Yonggi Cho) ले समेत आफू तेस्रो स्वर्गमा ३ घण्टा बिताएको दाबी गरेका छन्।
३३) “क्यारिज्म्याटिक जागृति” (Charismatic Renewal) को सिद्धान्त (philosophy) के हो?
शुरुको पेन्टेकोस्टल पथ (Classical Pentecostalism) ले आफू परम्परागत माण्डलिक संरचनाहरूबाट अलग्गिएर नयाँ संरचनाको निर्माण गर्ने भनेर लिएको मार्ग-दर्शनप्रति क्यारिज्म्याटिक जागृतिले न्यूनतम वा शून्य अभिरुचि राखेको पाइन्छ। बरु, आत्मामा बप्‍तिस्मा भएकाहरू कुनै मण्डली वा अन्य समूहभित्र रहिरहेर त्यसका सदस्यहरूलाई प्रभावित पारेर नै वर्तमान संरचनाहरूलाई पवित्र आत्माको क्यारिज्म्याटिक क्रियाकलापद्वारा “जागृत” गराइनुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्त रेहको छ (रिचार्ड कबीडो, द न्यू क्यारिज्म्याटिक्स, पृष्ठ ९)।
३४) विश्वासीहरूलाई कुनचाहिँ आज्ञा दिइएको छ? — सत्यत्यागी (apostate) मण्डलीहरूलाई “जागृत” गराउन कि तिनीहरूदेखि अलग रहन?
२ कोरिन्थी ६:१४-७:१ — तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ
२ तिमोथी ३:५ — यस्ताहरूबाट पर बस
रोमी १६:१७ — तिनीहरूबाट टाढा बस
तीतस ३:१० — रद्द गर
२ यूहन्ना १० — स्वागत नगर
क्यारिज्म्याटिक जवाफ: “एउटै अनुभवले”
आधुनिक क्यारिज्म्याटिक अभियानले शिक्षागत सवालहरूलाई एकातिर पन्छाएर अनुभवहरूको एउटा सँगालोको वरिपरि ऐक्यवद्ध बन्न सकेको छ। शिक्षाले विभाजन ल्याउँछ। अनुभवले ऐक्यवद्ध बनाउँछ। (Stephen Board, “Are Catholic Charismatics ‘Evangelicals’?” Eternity, July 1978, page 13.)
बाइबलीय जवाफ: “परमेश्वरका जनहरूलाई सत्यता र शिक्षाले ऐक्यवद्ध बनाउनुपर्छ”
“अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी-भँचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे” (प्रेरित २:४२)।
“जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौं, एउटा पूरा बढेको मानिस बन्दैनौं, ख्रीष्टको परिपूर्णतारूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौं” (एफेसी ४:१३)। हाम्रो एकता परमेश्वरको पुत्रको साझा (एउटै) पहिचान र बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ।
परमेश्वरको सत्यतालाई बलि चढाएर “प्रेम” मा जोड दिने र खाँटी शिक्षालाई बलि चढाएर “एकता” मा जोड दिने आजको व्यापक सिद्धान्तदेखि होसियार हुनुहोस्। (प्रमिस किपर्स् अभियान जस्ता थुप्रै समूहहरू र “एकता” अभियानहरू (ecumenical movements) को सिद्धान्त यही नै छ। क्याम्पस क्रूसेडको आलोचनामा लेखिएको अङ्ग्रेजी लेख यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: The Importance of Doctrine and the Biblical Concept of Love — A Campus Crusade Critique.
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-10 12:31:262020-04-28 14:20:31सपना? दर्शन? / झूटा एकता
पावल एउटा पीडादायी (“काँडा”) शारीरिक (“शरीरमा”) रोगले ग्रस्त थिए। शरीरमा रहेको उक्त काँडा आफूबाट हटोस् भनी पावलले प्रभुलाई तीन पटक विन्ती गरे तर परमेश्वरले सोअनुसार गर्नुभएन। परमेश्वरले यसभन्दा उत्तम कार्य गर्नुभयो। उहाँले पावललाई आफ्नो अनुग्रह प्रशस्त छ भन्ने कुरा सिकाउनुभयो, परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई त्यस्तो शारीरिक कष्ट समेत सहन सक्ने क्षमता दिन्छ भन्ने कुराको बोध गराउनुभयो। आफ्नो सर्व-पर्याप्‍त अनुग्रहको बोध गराउन कहिलेकाहीँ परमेश्वरले दुःख-बिमार वा पीडा आउन दिनुहुन्छ।
“अब उसो पानी मात्र पिउने नगर, तर तिम्रो पेटका लागि, साथै घरीघरी भइरहने तिम्रा बिमारीहरूका कारणले अलि-अलि दाखमद्य प्रयोग गर।” तिमोथीको पेटको कमजोरी थियो जसको कारण उनी बारम्बार बिरामी पर्ने गर्थे। पावलले उनलाई कुनै चङ्गाइकर्ताकहाँ जान सल्लाह दिएनन्, न ता उनलाई उनका शारीरिक कमजोरीहरू पाप वा विश्वासको कमीका कारण हुन् भने। पावलले केवल एउटा सामान्य औषधी उपचारको सल्लाह दिए। [पावलले तिमोथीलाई मात लाग्ने रक्सी नभएर अङ्गुरको रस पिउनलाई सल्लाह दिएको हुन सक्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ। व्याकरणका विद्वान आथनेयस (Athenaeus, 280 AD) ले यसरी लेखेका छन्: “उसले गुलियो दाखरस लेओस्, पानीसँग मिसाएर वा गरम गराएर, विशेष गरी प्रोटोपोस भनिने खाले, त्यो गुलियो लेस्बियन गलुकस, पेटको लागि लाभदायक हुने भएकोले; किनकि गुलियो दाखरस [oinos] ले टाउकोलाई भारी बनाउँदैन” (Athenaeus, Banquet 2,24). प्राचीन लेखोटहरूमा पेटको समस्याहरूका लागि कण्वीकरण नभएको (unfermented) दाखरस प्रयोग गर्न सिफारिश गरिन्थ्यो भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो।]
“एरास्टस कोरिन्थमा रहे; तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु।” ट्रोफिमसको आत्मिक समस्या (पाप, विश्वासको कमी) थियो भन्ने त्यहाँ कुनै सङ्केत छैन, तर उनको एउटा शारीरिक समस्या भने थियो, तर पावलले उनलाई चङ्गाइ गरेनन्। यस जीवनमा कहिलेकाहीँ आफ्ना सन्तानहरू बिरामी हुनु नै परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, तर आउनेवाला जीवनमा भने कहिल्यै त्यसो हुन्न (प्रकाश २२:४)
कतिपय क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूको धारणाअनुसार, यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईं परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, केनेथ हेगन जुनियर (Kenneth Hagan Jr.) लेख्‍छन्: “परमेश्वरको इच्छा नै आफ्ना सन्तानहरू पूर्ण स्वस्थतामा जिऊन् भन्ने हो भन्ने मेरो विश्वास हो…आफ्ना सन्तानहरूलाई चङ्गाइ गर्नु सधैं नै परमेश्वरको इच्छा हो।” [मलाई जुलाई १६, १९८७ मा केनेथ हेगनद्वारा लेखिएको पत्रबाट] यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही प्रश्‍न गर्न हामीलाई कर लाग्छ: के तपाईंहरूमध्ये कसैकसैले चश्मा लगाउनुहुन्छ (केनेथ हेगनले त लगाउँछन्)? के तपाईंहरूमध्ये कसैकसैलाई रूघाखोखी लाग्ने गर्छ? के तपाईंहरूमध्ये कोहीले सिटामोल वा अन्य दुखाइ हटाउने ने ओषधी खाने गर्नुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न त, के तपाईंहरू मर्नुहुन्छ?
२४) के नयाँ नियमले “सुख-समृद्धिको सुसमाचार” (PROSPERITY GOSPEL) को शिक्षा सिकाउँछ?
यो शिक्षा आज प्रायः सुनिने अति प्रचलित र आकर्षक सन्देश हो, अर्थात् यदि तपाईंले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंलाई स्वस्थलाभ र सम्पत्तिलाभहुनेछ। यसको मतलब तपाईंलाई शारीरिक स्वस्थलाभ र भौतिक उन्नति हुनेछ। तपाईंको शरीर रोगबिमारबाट स्वतन्त्र हुनेछ र तपाईंको बैंक खाता भरिभराउ हुनेछ। तर वास्तवमा यस प्रकारको शिक्षाबाट साँच्चै आर्थिकलाभ उठाउनेहरू चाहिँ ती झूटा शिक्षकहरू मात्र हुन्छन्, अर्थात् “सुख-समृद्धिको सुसमाचार” का प्रचारकहरू।
“जति सुनेपनि फरक पर्दैन — हामी स्वस्थ हुनु र हामीले यस जीवनमा असल-असल कुराहरू पाउनु परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरा हामीलाई बारम्बार सम्झना गराइन आवश्यक छ” (केनेथ हेगन)।
येशूको सेवाकार्य गरीब थियो भन्ने विश्वासको बारेमा केनेथ कोपल्याण्ड (Kenneth Copeland) यसो भन्छन्: “त्यो त हास्यास्पद कुरा हो। येशू गरीब हुनु असम्भव कुरा हो! पुरानो नियमको समयदेखि नै परमेश्वरले, उहाँको साथमा सिद्ध र सीधा चालमा चल्नेहरूलाई भौतिक आशिषहरूको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यदि परमेश्वरले येशूलाई आर्थिक आशिष दिन विफल हुनुभएको भए परमेश्वरले स्वयम् आफ्नै वचनलाई तोड्नुहुनेथ्यो” (करिज्मा, सेप्टेम्बर १९९०)।
“यी कष्टहरूद्वारा कोही पनि ढलपल नहोस् भनेर; किनकि तिमीहरू आफै जान्दछौ, हामी यसैका निम्ति ठहराइएका छौं। किनकि साँच्चै तिमीहरूसँग रहँदा, ‘हामीले कष्ट भोग्नुपर्छ’ भनी हामीले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेका थियौं; र यस्तै भयो पनि, अनि तिमीहरूले पनि जान्दछौ।”
प्रेरित पत्रुस समृद्धिको सुसमाचारको बारेमा अनजान थिए जब उनले भने, “चाँदी र सुन त मसँग छैन” (प्रेरित ३:६)! पावल प्रेरित पनि यस शिक्षाको बारेमा अनजान थिए। उनले विश्वासीहरूलाई गरिबजस्ता र केहि नहुनेजस्ता भनी बयान गरेका छन् (२ कोरिन्थी ६:१०)!
संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको एउटा विषम क्यारिज्म्याटिक समूह (“द ग्लोरी बार्न”) ले विश्वासीहरू कहिल्यै डाक्टरकहाँ जान हुन्न बरु चङ्गाइ पाउन परमेश्वरमा भरोसा राख्‍नुपर्छ भनेर सिकाए। बच्चा जन्माउने समयमा डाक्टर वा नर्सको मदत नपाएको हुनाले कोही गर्भवति महिलाहरूलाई साह्रो पर्‍यो र उनीहरूका बच्चाहरू मरे। समस्या अझ जटिल बन्यो जब यस समूहका सदस्यहरूले परमेश्वरसित यी मरेका बच्चाहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न थाले। स्थानीय समाचार माध्यमले यी घटनाहरूलाई सार्वजनिक बनाइदिए। फलस्वरूप ख्रीष्टको नामलाई ठूलो शर्ममा पार्ने काम भयो। गलत शिक्षाको कारण गलत अभ्यास भएको थियो।
“तर येशूले त्यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “निरोगीहरूलाई होइन, तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ” (मत्ती ९:१२)।
“प्रिय वैद्य लूका र डेमासले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदै छन्” (कलस्सी ४:१४)।
“अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका सबै प्रकारको रोग र सबै किसिमको शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालीलभरि घुम्नुभयो। अनि उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फैलियो; र किसिम-किसिमका रोग र पीडाहरूले सताइएका सबै बिरामी मानिसहरूलाई, दुष्ट आत्मा लागेकाहरू, छारे रोग लागेकाहरू र पक्षघात भएकाहरूलाई तिनीहरूले उहाँकहाँ ल्याए; अनि उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो” (मत्ती ३:२३-२४)।
प्रभुले आफ्ना चेलाहरू (प्रेरितहरू) लाई “हरेक रोग र हरेक शारीरिक दुर्बलता निको पार्ने अधिकार दिनुभयो” (मत्ती १०:१)।
“अनि परमेश्वरले पावलका हातद्वारा विशेष प्रकारका सामर्थ्यका कामहरू गर्नुभयो; यहाँसम्म कि उनको शरीरबाट रुमालहरू वा गम्छाहरू बिरामीहरूकहाँ लगिन्थे, र रोगहरूले तिनीहरूलाई छोड्थे, र दुष्ट आत्माहरू तिनीहरूबाट निस्कन्थे” (प्रेरित १९:११-१२)।
२७) के आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” (Faith Healers) ले चङ्गाइ गर्न सक्छन्?
सुश्री कूलम्यान कहिलेकाहीँ श्रोतागणतर्फ फर्केर हेर्थिन् र भन्थिन्, “यहाँ एकजना ब्रेस (brace, अड्याउने चीज) लगाउने व्यक्ति छ—खुट्टाको ब्रेस—तपाईंलाई अबदेखि उसो त्यो ब्रेस चाहिँदैन। त्यसलाई फुकालिदिनुस्। आउनुस् र आफ्नो चङ्गाइलाई दाबी गर्नुस्।” ब्रेसको नाम लिएर बोलाएको पहिलो पटकमा कोही अगाडि आएन। अन्तमा एउटी भर्खरकै राम्री युवती मञ्चमाथि आइन्। उनले आफ्नो खुट्टाको ब्रेसलाई हातले हल्लाउँदै देखाउँदैथिइन् र उभिरहेकीथिइन्। उनी यौटाचाहिँ सद्दे र अर्कोचाहिँ सुकेको खुट्टामा उभिरहँदा उनको पुट्ठाको हाड (pelvis) एकातिर नराम्ररी ढल्केको देखिन्थ्यो।
क्याथरिन कूलम्यानले उनलाई सोधिन्, “कति भयो यो ब्रेस लगाएकी?” “तेह्र वर्ष। सात वर्षमा पोलियो लागेदेखि।” “अब तिमी निको भयौ। अबदेखि उसो त्यो तिमीलाई चाहिँदैन। तिमीले त्यसलाई फुकालिसकेकी छौ।” “हो”, तिनले भनिन्। “मैले प्रभुमा विश्वास राखेकी छु। मैले प्रार्थना गरेकी छु, र उहाँले मलाई निको पार्दैहुनुहुन्छ।” सबैले ताली बजाए। युवती रोइन्।
मञ्चबाट ओर्लँदै गरेका “चङ्गाइको दाबी” गर्नेहरूमध्येबाट अनुपरीक्षण (follow-up study) मा सहभागी हुन चाहने प्रत्येकको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र रोगको विवरण टिपोट गर्न मैले दुईजना कानूनी सहायकहरूलाई खटाएको थिएँ। ८२ जनाको नाम मिल्यो। कार्यक्रमको केही हप्‍तापछि, आइतवार जुलाई १४ का दिन मिनियापोलिस शहरमा आउन र आफ्नो अनुभव बताउन सूचीमा नाम भएको हरेकलाई पत्र पठाएर निमन्त्रणा दिइयो। २३ जना उपस्थित भए। मैले उनीहरू प्रत्येकसित त्यसपछिका महिनाहरूमा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिनका निमित्त बन्दोबस्त गरें।
निजहरूसित कुराकानी गर्दा, म यथासम्भव इमानदार, समझदार र निष्पक्ष रहने प्रयास गरें, तर मैले आफ्नो चिकित्सकीय ज्ञान र व्यावहारिक बुद्धि (common sense) लाई पन्छाउन सकिनँ। निजहरूले बताएका सबै कुरालाई मैले ध्यानपूर्वक सुनें, र त्यहाँ कुनै आश्चर्यकर्म भएको थियो कि भन्ने कुराको समर्थन गर्न सक्ने प्रत्येक सम्भावनालाई अनुसन्धान गरें। अध्ययनले मलाई एउटै निष्कर्षमा पुग्न बाध्य गरायो: चङ्गाइ कार्यक्रममा आफूहरूले चङ्गाइको दाबी गरी पछि मिनियापोलिसमा आई सो कुराको पुनः समर्थन जनाउने बिरामीहरूमध्ये एउटैले पनि वास्तवमै अलौकिक ढङ्गबाट (miraculously) कुनै कुराबाट चङ्गाइ पाएका थिएनन्। [William A. Nolen, M.D., “In Search ofaMiracle,” McCall’s Magazine, September 1974. डाक्टर नोलेनले आफ्नो खोजीका परिणामहरूलाई इन सर्च अफ अ मिराकल (“आश्चर्यकर्मको खोजीमा”) भन्ने पुस्तकमा पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ।]
२८) आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” ले आफ्ना असफल प्रायसहरूको स्पष्टिकरण कसरी दिन्छन्?
“चङ्गाइ गर्न हामीसित शक्ति नभएको होइन; बिरामी व्यक्तिको विश्वासको कमीले हो!” कुनै सिप नलागेपछि, बिरामीकै दोष!
मत्ती १२:१५ मा ठूला-ठूला भीड प्रभु येशूका पछि लागे र, उनीहरूसँग विश्वास होस् या नहोस्, “उहाँले ती सबैलाई निको पार्नुभयो”। प्रेरित ५:१६ मा रोगीहरूको एउटा ठूलो जमातलाई प्रेरितहरूकहाँ ल्याइएको थियो, “अनि तिनीहरू सबै निको पारिए”। विश्वासको शर्तबिना नै यी चङ्गाइहरू सबैलाई प्राप्‍य थियो। एउटै बिरामी निराश भई फर्कनुपरेन।
प्रेरित २०:९-१२ मा पावलले एउटा व्यक्तिलाई सबैभन्दा गम्भीर रोगबाट चङ्गाइ गरेको पाउँछौं, अर्थात् मृत्युबाटै। यहाँ एक युवा वास्तवमै मरिसकेका थिए। निश्चय नै मरिसकेको व्यक्तिले विश्वास गर्न सक्दैन! “उसको विश्वासको कमीले गर्दा मैले उसलाई मृत्युबाट बिउँताउन सकिनँ” भनी कुनै आधुनिक चङ्गाइकर्ताले भन्नु त हास्यास्पद हुन्छ। यसले एउटा रोचक प्रश्‍न उब्जाउँछ: यदि आधुनिक चङ्गाइकर्ताहरूसित ख्रीष्ट र प्रेरितहरूसितको जस्तै चङगाइ-शक्ति छ भने, किन उनीहरू मरेकालाई बिउँताउँदैनन्?
“अनि जब त्यस ठाउँका मानिसहरूले उहाँलाई चिने, तब तिनीहरूले वरिपरिका सबै इलाकाहरूमा पठाए, र सबै बिरामीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याए; अनि उहाँको वस्त्रको किनार मात्र भए पनि छुन पाऔं भनी तिनीहरूले उहाँलाई विन्ती गरे; अनि जतिले छोए, ती एकदम निको भए” (मत्ती १४:३५-३६)।
“अनि उहाँकै नामले, उहाँको नाममाथि राखिएको विश्वासद्वारा तपाईंहरूले देख्‍नुभएको र चिन्नुभएको यी मानिसलाई बलियो बनायो; अनि उहाँद्वाराकै विश्वासले यिनलाई तपाईंहरू सबैजनाका सामु यो सिद्ध स्वास्थ्य दिएको छ” (प्रेरित ३:१६)।
“तर यो कुरा थाह पाएर येशू त्यहाँबाट निस्कनुभयो; अनि ठूला-ठूला भीड उहाँका पछि लागे; अनि उहाँले ती सबैलाई निको पार्नुभयो” (मत्ती १२:१५)।
“अनि चारैतिरका शहरहरूबाट बिरामी मानिसहरूलाई र अशुद्ध आत्माहरूद्वारा सताइएकाहरूलाई लिएर एउटा भीड पनि यरूशलेममा भेला भयो; अनि तिनीहरू सबै निको पारिए” (प्रेरित ५:१६)।
“तब एकजना दुष्ट आत्मा लागेको, अन्धा र गुँगा मानिस उहाँकहाँ ल्याइयो; अनि उहाँले त्यसलाई निको पार्नुभयो, यहाँसम्म कि त्यस अन्धा र गुँगा मानिस बोल्यो र देख्‍यो पनि। अनि सबै मानिसहरू छक्क परे, र भने: “के यहाँ नै दाऊदका पुत्र हुनुहुन्न र?” तर फरिसीहरूले यो सुनेर भने: “यस मानिसले दुष्ट आत्माहरूको शासक बेल्जेबुलद्वारा बिना दुष्ट आत्माहरू निकाल्दैन” (मत्ती १२:२२-२४)।
“अनि निको पारिएको मानिसलाई उनीहरूसँगै उभिरहेको देखेर तिनीहरूले यस कुराको विरोधमा केही भन्न सकेनन्… “यी मानिसहरूलाई हामी के गरौं? किनकि उनीहरूद्वारा साँच्ची नै एउटा प्रसिद्ध चिन्ह गरिएको छ, यो यरूशलेमका सारा बासिन्दाकहाँ प्रकट भएको छ; र यो हामी इन्कार गर्न सक्दैनौं” (प्रेरित ४:१४,१६)।
“अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन्, लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कोरीहरू शुद्ध पारिन्छन्, बहिराहरूले सुन्छन्, मुर्दाहरू बिउँताइन्छन्, र गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ” (मत्ती ११:५, सन्दर्भलाई हेर्नुहोस् र यशैया ३५:५-६ सित तुलना गर्नुहोस्)।
३१) आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” का “आश्चर्यजनक” उपचारहरू कस्ता छन्?
१) शङ्कास्पद “चङ्गाइ”
२) नियन्त्रित वातावरणमा गरिएका “चङ्गाइ”
“तर अनौठो कुरो के छ भने, चङ्गाइको वरदान भएको दाबी गर्नेहरू आफ्नो पाल, तम्बु वा टीभी कक्षभन्दा बाहिर कहिल्यै निस्केका देखिन्नन्। आफ्ना वरदानलाई उनीहरूले सदैव नियन्त्रित वातावरणभित्र अर्थात् उनीहरूकै इच्छाअनुसारको व्यवस्थापित मञ्चमा, उनीहरूकै समयतालिकामा, अभ्यास गरेको देखिन्छ। हैन, अस्पतालकै ठूला-ठूला भीडहरूका बीचमा उक्त चङ्गाइको वरदान प्रयोग गरिएको किन सुनिँदैन? यी चङ्गाइकर्ताहरूले आफ्ना वरदानलाई भारत र बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा किन प्रयोग गरिरहेका छैनन्? बाहिर बाटो-बाटोमै रोग-बिमारले ग्रस्त भएका मानिसहरू भेटिने स्थानहरूमा किन उनीहरू देखा पर्दैनन्? [John MacArthur, Jr., The Charismatics, p.134.]
३) निराशाजनक “चङ्गाइ”
पाङ्ग्रे मेचमा रहेका साह्रै निर्बल रोगीहरू पांङ्ग्रे मेचमै थिए। उनीहरू त्यहाँबाट निस्कँदै गर्दा आफ्ना अपाङ्ग बाल-बालिकाहरूलाई पाङ्ग्रे मेचमा गुडाउँदै एलभेटरतिर लग्दैगरेका बाबुआमाहरूको आँखामा मैले आँसु देख्दा मेरो मनमा यो देख्‍न त क्याथरिन कूलम्यान पनि मसँगै त्यहाँ हुनुपर्ने भन्ने लाग्यो। आशा भङ्ग भएका ती रोगीहरू र बाबुआमाहरूले कति पीडा भोग्दै छन् भन्ने कुरा क्याथरिन कूलम्यानलाई वास्तवमा थाहै छैन भन्ने मलाई लाग्यो। उनलाई थाह होला भनेर मैले विश्वास गर्न सकिनँ। [William A. Nolen, M.D., “In Search ofaMiracle,” McCall’s Magazine, September 1974.]
“सम्भवतः उपस्थितमध्ये धरैजसोले चङ्गाइ पाएकै हुँदैनन्।” [Richard Quebedeax, The New Charismatics, page 86.]
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-10 11:31:092020-04-28 14:20:31चङ्गाइ
“पवित्र आत्मामा हुने बप्‍तिस्मा, मुक्तिपश्चात एउटा विश्वासीलाई ठोस रूपमा दिइने एउटा निश्चित, व्यक्तिगत अनुभव हो जुनचाहिँ पवित्र आत्माले अलौकिक रूपमा बोली दिनुभएअनुसारको एउटा नयाँ भाषामा बोल्ने प्रमाणसहित हुँदछ।” [FromaCharismatic tract written by Dr. Hobart Freeman and published by Faith Ministries & Publications.]
“पवित्र आत्माको बप्‍तिस्मा अन्य भाषाहरूको बोलीसहितको मुक्तिपश्चातको एउटा बेग्लै, निश्चित अनुभव हो जसले निजलाई जीवन र सेवाकार्यका निम्ति सामर्थ्य प्रदान गर्दछ।” [From the doctrinal statement of the Rock Church (the name of certain charismatic churches in Connecticut and perhaps elsewhere)]
“किनकि चाहे हामी यहूदी हौं चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्‍तिस्मा भयौं; र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो” (१ कोरिन्थी १२:१३)।
क्यारिज्म्याटिक जवाफ: “मुक्ति पश्चात्”
चाखलाग्दो कुरा, परमेश्वरले “सबै होइन” (१ कोरिन्थी १२:३० – सबैले विभिन्न भाषा बोल्दैनन्) भन्नुहुँदा क्यारिज्म्याटिक लहरले “सबै हो” भन्छ, र परमेश्वरले “सबै हो” (सबै विश्वासीहरू शरीरभित्र बप्‍तिस्मा भइसकेका छन्) भन्नुहुँदा क्यारिज्म्याटिक लहरले “सबै होइन” भन्छ।
अन्य भाषाहरूमा बोल्ने “पेन्टकोस्टल” अनुभव पाइसकेका ख्रीष्टियनहरूले मात्र
“सबैले” (१ कोरिन्थी १२:१३)। यस बप्‍तिस्माबिना तपाईं ख्रीष्टको मण्डलीको अङ्ग बन्न सक्नुहुन्न! उहाँको देहभित्र प्रवेश पाउनलाई यो नै एउटै मात्र बाटो हो!
२०) के पवित्र आत्माको लागि पर्खनु (“ट्यारी गर्नु”) पर्छ?
अन्य भाषा प्राप्‍त गर्नलाई “ट्यारी गर्ने” तरिका यस प्रकार हुन्छ: प्रवचन पछि प्रचारकले अन्य भाषाको अनुभव पाउन चाहनेहरूलाई अगाडि आउन र घुँडा टेक्न निमन्त्रणा दिन्छन्। त्यसपछि अनुभव-प्राप्‍त व्यक्तिहरू नयाँहरूसित प्रार्थना गर्न र मदत, सल्लाह दिन उनीहरूकहाँ जान्छन्। कतिपय नयाँहरूले थोरै बेरमै अन्य भाषामा बोल्न थाल्छन् भने अरूहरूको यात्राचाहिँ लामो र कठिन हुन सक्छ। साँझको सभा हो भने, मध्यरात पार गरिसक्दा पनि नयाँहरू प्रार्थना गरिरहेको भेटिनु असाधारण मानिँदैन यद्यपि “वेदीका सेवकहरू” भने प्राय: कमै बाँकी रहेका होलान्। अनि यदि कसैले उक्त रात सफलता हासिल नगरेको खण्डमा उसलाई प्रयास जारी राख्‍न हौसला दिइन्छ। मैले थुप्रै रात ट्यारी गरें। मैले वेदीमा घण्टौं प्रार्थना गर्नमा बिताएँ, तर मैले जति बेर प्रार्थना गरे पनि मैले सफलता प्राप्‍त गर्न सकिनँ। [Wayne A. Robinson, I Once Spoke in Tongues, pages 37-38.]
बाइबलअनुसारको “ट्यारी” गर्ने काम निकै फरक कुरो हो। यसलाई केवल दुइटा खण्डमा भेटिन्छ:
“अनि हेर, म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमाथि पठाउँछु; तर माथिबाटको सामर्थ्य नपाउञ्जेल तिमीहरू यरूशलेम शहरमा पर्खिरहो” [अङ्ग्रेजीमा “ट्यारी”] (लूका २४:४९)।
“अनि तिनीहरूसँग भेला भएर उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो: “यरूशलेम छोडेर नजानू, तर पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खनू, जसको विषयमा तिमीहरूले मबाट सुनेका छौ” (प्रेरति १:४)।
“ट्यारी” भन्ने शब्दको अर्थ केवल “पर्खनु” हो। पेन्टेकोस्ट आउनु अघि चेलाहरूलाई आत्माको प्रतिज्ञाको निम्ति पर्खिरहो भन्ने आज्ञा दिइएको थियो। उहाँ पेन्टेकोस्टको दिनमा (प्रेरित २) आनुभयो र पर्खाइको अवधि पनि सक्कियो। बाइबलमा पेन्टेकोस्टपछि यता पवित्र आत्माको लागि पर्खिरहन कुनै आज्ञा दिइएको पाइँदैन।
पवित्र आत्मा पाउन एक व्यक्तिले ट्यारी गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ र कहिले काहीँ लामो पीडादायी अनुभव भएर जानुपर्छ, र सफल नभएको खण्डमा उसले घरीघरी प्रयास गरिनैरहनुपर्छ (बुँदा नम्बर २० मुनि उद्दरण गरिएको “ट्यारी” गर्ने तरिकालाई पढ्नुहोस्)।
“जसले ममाथि विश्वास गर्छ, पवित्रशास्त्रले भनेअनुसार, उसको हृदयबाट जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्!” तर यो कुरा उहाँले आत्माको विषयमा भन्नुभयो, जसलाई उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पाउन लागेका थिए…
गलाती ३:२ — “तिमीहरूबाट म यो मात्र जान्न चाहन्छु – तिमीहरूले आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरू (ट्यारी, प्रार्थना, कठिनाइ, प्रयास आदि) द्वारा पायौ कि विश्वासको समाचारद्वारा?” प्रत्यक्ष जवाफ यही हो, “विश्वासको समाचारद्वारा”। यो शारीरिक प्रयासको प्रतिफल होइन। यो त मुक्तिदातामा राखिएको सरल विश्वासको प्रतिफल हो।
“तर जब शान्तिदाता आहनुहुन्छ, जसलाई म पिताका तर्फबाट तिमीहरूकहाँ पठाउनेछु अर्थात् सत्यका आत्मा, जो पिताबाट निस्कनुहुन्छ, तब उहाँले मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ” (यूहन्ना १५:२६)।
माथिको चित्रमा के देख्‍नुहुन्छ? तपाईं भन्नुहोला, “कछुवा!” तर वास्तवमा जवाफ हो, “काँड र कछुवा”। काँड आफै देखिन चाहन्न। काँडले केवल कछुवाको गवाही दिइरहेछ, कछुवालाई देखाइरहेछ। काँड एउटा गवाही हो। यसले आफूदेखि अन्यत्र ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ, दर्शकलाई कछुवामा ध्यानकेन्द्रित गराउन चाहन्छ।
“उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ; किनभने जे मेरो छ, त्यहीबाट उहाँले प्राप्‍त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१४)।
“तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै-हेर्दै हामी सबैजना, प्रभुद्वारा, जो आत्मा हुनुहुन्छ, एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौं” (२ कोरिन्थी ३:१८)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-10 10:54:332020-04-28 14:20:31पवित्र आत्माको बप्‍तिस्मा
१४) अन्य भाषाहरूको वरदान कहिले बन्द भयो?
१) “अन्य भाषाहरूको वरदान बन्द भएकै छैन। परमेश्वरले नयाँ नियमको समयमा जस्तै गरी आज पनि अन्य भाषाको वरदान दिँदैहुनुहुन्छ।”
२) “अन्य भाषाको वरदान मण्डली इतिहासको शुरूतिर अन्त भयो, सम्भवत: पहिलो शताब्दीको अन्ततिर। तरैपनि यी अन्तिम दिनहरूमा अन्य भाषाहरूको वरदान फेरि प्रकट भएको छ र परमेश्वरले फेरि पनि यस वरदानलाई दिँदैहुनुहुन्छ।”
>> इभान्जेलिकलहरूको सम्झौतापूर्ण (compromising) जवाफहरू:
डा. बिल्ली ग्राहाम (Dr. Billy Graham) ले पवित्र आत्मा (The Holy Spirit, Word, १९७८) शीर्षक गरेको आफ्नो पुस्तकमा यसरी लेख्छन्:
“अन्य भाषाको वरदान नयाँ नियमका समयहरूका लागि मात्र सीमित थियो भन्ने कुराको बाइबलीय आधार त म आफैले कतै पाउन सक्दिनँ” (पृष्ठ १७२)।
अन्य भाषाहरूको वरदानको चर्चा गरिएको उनको “चिन्हरूपी वरदानहरू” (Sign Gifts) भन्ने अध्यायमा अन्य भाषाहरू बन्द हुनेछन् भन्ने पावलको भविष्यवाणी भएको १ कोरिन्थी १३:८ को उल्लेख समेत नहुनु अनौठो मान्नुपर्छ।
आज पनि परमेश्वरबाटको अन्य भाषाको सकली वरदान छ भनी चर्चित लेखक हाल लिन्ड्सी (Hal Lindsey) ले सिकाउँछन्। शैतान जगतमा जिँउदो र सक्रिय छन् (Satan is Alive and Well On Planet Earth) शीर्षक रहेको उनको अधिक मात्रमा बिक्री भएको पुस्तकको पृष्ठ १४७ मा उनले लेख्छन्,
“परमेश्वरले आज अन्य भाषाको सकली वरदान दिँदैहुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु।” अन्य भाषाहरू वास्तवमै बन्द भएका थिए भन्ने उनको मान्यता रहेको छ (जसरी इतिहासमा प्रमाणित छ) तर यी आखिरी दिनहरूमा अन्य भाषाहरूको वरदान फेरि देखा परेको छ भनी उनी सिकाउँछन् (पृष्ठ १४०-१४१)।
“च्यापल अफ दि एअर” (Chapel of the Air) का चर्चित रेडियो प्रचारक जोन डी जेस (John D. Jess) ले “अन्य भाषाहरूको वरदान मण्डलीलाई प्राप्‍य नभएको” भन्ने कुरालाई “अन्य भाषाहरूको वरदानलाई इन्कार गर्ने हास्यास्पद अतिवादी अडान” भनेर बताउँछन् (डिभाइड एण्ड कन्कर, पृष्ठ ४०)।
>> आधारभूतवादी बाइबल विश्वासीहरू (Fundamental Bible Believers) को जवाफ:
“नयाँ नियम पवित्र शास्त्रहरू लेखिने र तिनको आधिकारिक मान्यता स्थापित हुने क्रममा अन्य भाषा बोल्ने र चिन्हरूपी आश्चर्यकर्महरू गर्ने कामहरू बिस्तारै बन्द भए” (न्यू इङ्गल्याण्ड बाइबल कन्फरेन्सको विश्वासको विवरण)।
>> बाइबलीय जवाफ:
“प्रेम कहिल्यै टल्दैन। तर चाहे भविष्यवाणीहरू होऊन्, ती बितेर जानेछन्; चाहे भाषाहरू होऊन्, ती बन्द हुनेछन्; चाहे ज्ञान होस्, त्यो बितेर जानेछ” (१ कोरिन्थी १३:८)।
अन्य भाषाहरूको वरदान बन्द हुनेछन् भनी पावलले भविष्यवाणी गरे। यसको मतलव परमेश्वरले अन्य भाषाहरूको वरदान दिने कामलाई निरन्तरता दिनुहुनेछैन। एउटा समस्या यो छ कि पावलले यस पदमा अन्य भाषाहरू कहिले बन्द हुनेछन् भनेर बताएनन्। उनले “अन्य भाषाहरू ७० एडीमा बन्द हुनेछन्” भनेनन्। उनले “अन्य भाषाहरू १००० वर्ष पछाडि बन्द हुनेछन्” भनेनन् वा उनले “अन्य भाषाहरू प्रभुको दोस्रो आगमनमा बन्द हुनेछन्” भनेनन्।
अन्य भाषाहरू वास्तवमा कहिले बन्द भए त भनी निर्धारण गर्नलाई तीनओटा आधारहरू छन्। हामी अब प्रत्येकलाई विचार गर्नेछौं।
१) इतिहासलाई हेर्दा (Historical Approach)
अन्य भाषाहरूको वरदान मण्डली इतिहासको शुरूतिरै बन्द भए भन्ने कुराको अत्यधिक ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ। क्यारिज्म्याटिक अभियानकै मित्र रिचार्ड कबीडोले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्:
दोस्रो शताब्दीको आखिरीदेखि अठाह्रौं वा उन्नाइसौं शताब्दीसम्म नै अन्य भाषाहरू देखा परेको गवाही दुर्लभ र अस्पष्ट छ … तेस्रो शताब्दीका ओरिगेन, र चौथो शताब्दीका क्रिसोस्टोम, दुवैले अन्य भाषाका उल्लेखहरूलाई तिरस्कार गरेका छन्, र त्यसको निरन्तरताको समर्थनलाई इन्कार गरेका छन्। पाँचौं शताब्दीको शुरूतिरका अगस्टिनले अन्य भाषा केवल बाइबलकालीन समयहरूमा प्रकट हुने गरेको युगानुकूल चिन्ह थियो भनेर ठोकुवा दिएका छन्। [Richard Quebedeax, The New Charismatics, pp. 20-21]
महान् प्रचारक क्रिसोस्टोम (Chrysostom) को टिप्पणी उल्लेखनीय छ:
“यो पूरै खण्ड ज्यादै अस्पष्ट छ [१ कोरिन्थीमा उल्लेखित अन्य भाषाहरूको पदहरूको बारेमा टिप्पणी गर्दै] तर यो अस्पष्टताको कारण हाम्रो अज्ञानता हो। उल्लेखित तथ्यहरूका बारेमा हामी अनजान भएका हुनाले र ती कुराहरू अब बन्द भइसकेका हुनाले ती कुराहरू हामीलाई अस्पष्ट लागेका हुन् किनकि ती कुराहरू उहिलेको समयमा हुने गर्थे तर ती अब बन्द भइसकेका छन्।” [Homilies, XXIX, 1.]
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, चौथो शताब्दीका लेखक क्रिसोस्टोमले पावलद्वारा वर्णित अन्य भाषाहरूको वरदानचाहिँ पावलको समयमा सक्रिय रहेको तर क्रिसोस्टोमको समयमा आएर निष्क्रिय भइसकेको भनी बयान गरेका छन्। उनले उक्त वरदान “बन्द” भइसकेको भनी टिप्पणी गर्दछन्।
क्लीओन रजर्सले यसरी लेखेका छन्:
“उल्लेखनीय कुरा यो छ कि प्रेरितहरूपछिका अग्रजहरूका कुनै पनि लेखोटमा अन्य भाषाहरूको वरदानलाई उल्लेख गरिएको छैन, कतै त्यसको अलिकति छनक समेत पाइँदैन।” [John MacArthur, Jr., The Charismatics, p. 169.]
अन्य भाषाहरूको वरदान, पावलका अघिल्ला पत्रहरूमध्येमा गनिने १ कोरिन्थीमा मात्र उल्लेख हुनु तर पावलका पछिल्ला पत्रहरूमा त्यसको कतै उल्लेख नहुनु एउटा उल्लेखनीय कुरा हो। यसले अन्य भाषाहरूको वरदान, बाइबलका लेखोटहरू पूर्ण हुनु अगावै बन्द भइसकेको हुन सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ।
२) सन्दर्भलाई हेर्दा (Contextual Approach)
अन्य भाषाहरू कहिले बन्द भए भनेर निर्धारण गर्न यस प्रमाणिकरणमा १ कोरिन्थी १३:८ (“भाषाहरू…बन्द हुनेछन्”) को सन्दर्भलाई अध्ययन गरिनेछ। उक्त अध्यायको मूल सन्देशलाई सारांशमा निम्न बुँदाहरू मार्फत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
टलेर जाने कुरा तीनओटा छन् (पद ८)
रहिरहने कुरा तीनओटा छन् (१३)
कहिल्यै नटल्ने कुरा एउटा छ (८); यो सदासर्वदा रहिरनेछ (पद १३)
यहाँ तीनओटा काल-खण्डहरूलाई सङ्केत गरिएको छ:
अगमवाणीको, अन्य भाषाहरूको र ज्ञानको वरदान सक्रिय रहने काल-खण्ड – यी दानहरू मण्डलीको प्रारम्भिक चरणमा परमेश्वरबाट दिइएका विशिष्ट प्रकाशकीय दानहरू (revelatory gifts) हुन्।
अगमवाणीको, अन्य भाषाहरूको र ज्ञानको वरदान अन्त भइसकेको, बन्द भइसकेको, बितेर गइसकेको (पद ८) समय, तर विश्वास, आशा र प्रेम भनिने सद्‍गुणहरू रहिरहने काल-खण्ड — यो काल-खण्ड चाहिँ वर्तमान युगको काल-खण्ड हो।
प्रेम मात्र रहिरहने तर विश्वास र आशा रहिनरहने काल-खण्ड — यो अनन्तताको अवस्थिति (eternal state) हो, जब त्यहाँ विश्वासको सट्टामा दृष्टि हुनेछ (२ कोरिन्थी ५:७; हिब्रू ११:१) र आशाको सट्टामा अनुभूति हुनेछ (रोमी ८:२४-२५)।
तसर्थ, अनन्ताको अवस्थिति शुरु हुनु अगाडि एउटा काल-खण्ड त्यहाँ हुनैपर्छ जुन बेला अन्य भाषाहरूको र अगमवाणीको दानहरू निष्क्रिय बनेका हुन्छन् तर विश्वास र आशा सक्रिय रहिरहन्छन् भन्ने कुरा १ कोरिन्थी १३ अध्यायले स्पष्टै सिकाएको छ। अन्य भाषाहरूको वरदानलाई यस वर्तमान युगभरि दिइँदै आएको छ भन्ने शिक्षालाई यसले खण्डन गर्दछ।
३) उद्देश्यलाई हेर्दा (Purposive Approach)
अन्य भाषाहरूको वरदानको उद्देश्य के थियो? अन्य भाषाहरूको उद्देश्य जान्न सकियो भने अन्य भाषाहरू कहिले बन्द भए भनेर निर्धारण गर्न सम्भव हुन्छ। यस उद्देश्यसम्बद्ध तर्कलाई यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ: जुन उद्देश्यका लागि भनेर यस वरदान दिइयो उक्त उद्देश्यको निम्ति यसको कुनै काम नरहेपछि अन्य भाषाहरूको वरदान बन्द हुन गयो।
नयाँ नियममा एउटै मात्र खण्ड पाइन्छ जसमा अन्य भाषाहरूको उद्देश्य बताइएको छ। त्यहाँ पावल यसरी भन्छन्:
“यसकारण भाषाहरूचाहिँ चिन्हका निम्ति हुन्…” (१ कोरिन्थी १४:२२)।
“निम्ति” भनेर रूपान्तर गरिएको निपात शब्द (ग्रीकमा ऐस्, εις) ले उद्देश्यलाई जनाउँदछ। यस पद (२२) मा अन्य भाषाहरूको उद्देश्य बताउँदा पावलले वास्तवमा अघिल्लो पद (२१) को कुरालाई आधार बनाएर निर्क्योल गरेको कुरा त प्रस्टै देखिन्छ। पद २१ चाहिँ निम्न महत्त्वपूर्ण शब्दहरूबाट शुरु हुन्छ,
“व्यवस्थामा लेखिएको छ…” (१ कोरिन्थी १४:२१)
यस पदमा पावलले पुरानो नियमको एउटा खण्ड, यशैया २८:११-१२ लाई उद्दरण गर्दछन्। अन्य भाषाको बाइबलीय उद्देश्य खुलाउने चाबीचाहिँ “व्यवस्थामा” अर्थात् पुरानो नियममा छ भनी पावल जान्दथे। पुरानो नियमले अन्य भाषाको बारेमा के सिकाउँदछ त? पुरानो नियमका समयमा अन्य भाषाहरूको सार्थता (significance) र उद्देश्य के थियो? जब-जब विदेशी भाषाहरू सुनिन्थे, तब-तब तिनका मतलब के हुन्थे?
विदेशी भाषाहरूको सार्थता देखाउने पुरानो नियमको खण्ड यशैया २८ मात्र होइन। यस्ता अन्य खण्डहरू पनि छन्। ती खण्डहरूले समग्रमा एउटा एकदम गम्भीर बाइबलीय सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गरिरहेको पाइन्छ — जुन सिद्धान्त इतिहासमा पटक-पटक प्रकट भएको छ। पुरानो नियममा विदेशी भाषाहरूको उल्लेखहरूलाई विचार गर्दा, एउटा ज्यादै गम्भीर र दुःखदपूर्ण श्रृङ्खला सहजै प्रकट हुन्छ:
मानिसलाई परमेश्वरको एउटा सन्देश थियो (उत्पत्ति ९:१,७)
ती मानिसहरू परमेश्वरको सन्देश सुन्न इन्कार गर्दछन् (उत्पत्ति ११:४)
परमेश्वरले इन्साफको चिन्हस्वरूप भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्छ (उत्पत्ति ११:७)
ती मानिसहरू तितरबितर पारिन्छन् (उत्पत्ति ११:८)
आफ्नो जातिलाई परमेश्वरको एउटा सन्देश थियो (व्यवस्था २८:१)
उनीहरू परमेश्वरको सन्देश सुन्न इन्कार गर्दछन् (व्यवस्था २८:१५)
परमेश्वरले इन्साफको चिन्हस्वरूप भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्छ (व्यवस्था २८:४९)
ती मानिसहरू तितरबितर पारिन्छन् (व्यवस्था २८:६४-६५)
आफ्नो जातिलाई परमेश्वरको एउटा सन्देश थियो (यर्मिया ४:१)
उनीहरू परमेश्वरको सन्देश सुन्न इन्कार गर्दछन् (यर्मिया ५:३)
परमेश्वरले इन्साफको चिन्हस्वरूप भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्छ (यर्मिया ५:१५)
ती मानिसहरू तितरबितर पारिन्छन् (यर्मिया ५:१९)
आफ्नो जातिलाई परमेश्वरको एउटा सन्देश थियो (यशैया २८:१२क)
उनीहरू परमेश्वरको सन्देश सुन्न इन्कार गर्दछन् (यशैया २८:१२ख)
परमेश्वरले इन्साफको चिन्हस्वरूप भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्छ (यशैया २८:११)
ती मानिसहरू तितरबितर पारिन्छन् (यशैया २८:१३)
तुलना गर्नुहोस् — यशैया ३३ को ठीक विपरित परिस्थिति
सन्दर्भचाहिँ हजार वर्षको राज्य (मलेनियम) को हो। इस्राएलले परमेश्वरको आशिषको अनुभूति गर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केतस्वरूप परमेश्वरले त्यहाँ भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्न (पद १९)। उनीहरू अबदेखि उसो कहिल्यै तितरबितर पारिनेछैनन्!
नयाँ नियममा उक्त श्रृङ्खला फेरि दोहोरिएको
मानिसहरूलाई परमेश्वरको एउटा सन्देश थियो (मत्ती ११:२८; यर्मिया ४:१ र यशैया २८:१२ सित तुलना गर्नुहोस्)
उनीहरू परमेश्वरको सन्देश सुन्न इन्कार गर्दछन् (मत्ती २३:३७)
परमेश्वरले इन्साफको चिन्हस्वरूप भाषाहरू सुनिन दिनुहुन्छ (प्रेरित २,१०,१९ आदि)
ती मानिसहरू तितरबितर पारिन्छन् (मत्ती २३:३८; २४:२)
अन्य भाषाहरूको वरदानले अविश्वासी इस्राएलको विरूद्धमा उनीहरूमाथि आउन लागेको इन्साफको चिन्हस्वरूप काम गरेको थियो। इन्साफ पूरा भइसकेपछि इन्साफको चिन्हको कुनै आवश्यकता पर्दैन। ७० ए.डी.मा जनरल तीतसको मातहतमा आएको रोमी सेनाको तरवारले मसीहलाई अस्वीकार गर्ने इस्राएल राष्ट्रको पतन गरिदियो। ७० ए.डी.देखि यता राष्ट्रको हकमा इस्राएल परमेश्वरको इन्साफमुनि परेको छ भन्ने कुराको कुनै शंका छैन। तसर्थ, चिन्हरूपी वरदानको रूपमा ७० ए.डी.देखि यता अन्य भाषाहरूको कुनै आवश्यकता रहेन भन्ने निष्कर्षमा हामी आइपुग्दछौं। इतिहासमा अन्तिम पटक अन्य भाषाहरूको वरदानको उल्लेख १ कोरिन्थीमा पाइन्छ जुनचाहिँ लगभग ५५ ए.डी. मा लेखियो। ७० ए.डी. पछि अन्य भाषाहरूको सकली वरदान फेरि प्रकट भएको ऐतिहासिक प्रमाण कतै पाइँदैन। अन्य भाषाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्‍यो, र अन्य भाषा बन्द भयो, ठीक जसरी परमेश्वरले प्रेरित पावलद्वारा पूर्वउल्लेख गर्नुभएको थियो (१ कोरिन्थी १३:८)।
उपर्युक्त बुँदाहरूको अझ विस्तृत प्रस्तुतिको खोजी गर्नुहुनेहरूले जर्ज जेलरद्वारा अङ्ग्रेजिमा रचित गड्स गिफ्ट अफ टङ्गस् नामक पुस्तकलाई यस लिङ्कमार्फत प्राप्‍त गर्न सक्नुहुनेछ:
God’s Gift of Tongues
१५) के मुक्ति नपाएकाहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्न सक्दछन्?
अन्य भाषाहरूको बाइबलीय वरदान भनेको एउटा यस्तो अलौकिक क्षमता थियो जसमा एउटा व्यक्तिले आफूले कहिल्यै नसिकेको विदेशी भाषामा बोल्न सक्थ्यो। मुक्ति नपाएको व्यक्तिसँग यस किसिमको ईश्वर-प्रदत्त क्षमता हुने कुरै भएन। आत्मिक वरदानहरू त विश्वासीहरूलाई उनीहरूले मुक्ति पाएकै घडीमा दिइन्छन्, अविश्वासीहरूलाई होइन।
उत्तेजनात्मक उच्चारणहरू बोलिने (“ग्लोसोलेलिय”, glossolalia) हिजोआजको घटना भनेको एउटा बेग्लै कुरो हो। मुक्ति नपाएकाहरूले यस्ता अन्य भाषाहरूमा बोलेका असङ्ख्य उदाहरणहरू छन्। यसमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ:
१) दोस्रो शताब्दीमा मन्टानिस्टहरू (Montanists) ले अन्य भाषाहरूमा बोले। यो एउटा झूटा-शिक्षा (heretical) समूह थियो। उक्त समूह विशेष गरी पवित्र आत्मा सम्बन्धीका त्यसका झूटा शिक्षाहरूका खातिर परिचित थियो। मन्टानस (Montanus) र उनका अनुयायीहरूको निम्न बयान युसीबियसको मण्डली इतिहास (Eusebius’ History of the Church) मा उल्लेख भएको छ:
मन्टानसले, आफू शिखरमा पुग्ने अनियन्त्रित महत्त्वाकाङ्क्षामा, आफैमाथि शत्रुलाई खुल्ला मौका दिए, र आत्मिक उत्तेजनाले भरिएर एक्कासी उसलाई एक किसिमको झुम्म तान्द्रा र अप्राकृतिक हर्षोन्मादले छोप्यो। उनी बर्बराए, र बित्थामा कराउन र अर्थहीन कुरा बोल्न थाले, र शुरूदेखि पुस्ता-पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको मण्डलीको अभ्याससित बाझ्ने तरिकाले अगमवाणी गर्न थाले। उसका स्वाङपूर्ण उच्चारणहरूलाई त्यस बखत सुन्नेहरूमध्येमा कतिजना चिढिए, र तिनीहरूले उनी दुष्टात्मा लागेको, भ्रमको आत्माको पकडमा परेको, र शान्ति भङ्ग गर्ने व्यक्ति रहेछन् भनी बुझे। प्रभुले कायम गर्नुभएको स्पष्ट भिन्नतालाई र झूटा अगमवक्ताहरूको बारेमा उहाँको चेताउनीहरूलाई सम्झना गर्दै तिनीहरूले उनलाई हप्काए र उसको बकबकलाई रोक्ने प्रयास गरे…। तब उनले गोप्य तवरले साँचो विश्वासप्रति अन्धा भएकाहरूको मनहरूलाई उत्तेजित गराई तातो बनाए, र यस मार्गमा दुईजना अरूलाई खडा गराए — अर्थात् स्त्रीहरूलाई जसलाई उनले त्यस स्वाङ पार्ने आत्माले भरिदिए, र फलस्वरूप उनीहरू मन्टानस जस्तै उन्मत्त भएर बित्थामा, अनुचित र अशिष्ट प्रकारले कराए।
युसीबियसका अनुसार अन्य भाषा बोल्ने यस अभ्यास मण्डलीको अभ्यास भन्दा बिलकुलै विपरित थियो। हुन पनि हो — मन्टानस र उनका अनुयायीहरूलाई मण्डलीबाट बहिष्कृत (excommunicated) गरियो।
२) दोस्रो शताब्दीका झूटा शिक्षक मार्कसका बारेमा इरेनेअस (Irenaeus) ले यसरी टिप्पणी गरेका छन्:
मार्कसले एउटी स्त्रीलाई [भन्छन्], “मबाट र मद्वारा कारिस (Charis) को दान प्राप्‍त गर…”
स्त्री: “मैले कहिल्यै अगमवाणी कहेको छैन, न ता म अगमवाणी कहन नै जान्दछु।”
मार्कस: “आफ्नो मुख खोल्नू, तिमीलाई जे आउँछ त्यही बोल्नू।”
यस वचनको कारण घमण्डले फुलेर, आफूले नै अगमवाणी बोल्ने भएँ भन्ने प्रतिक्षाले प्राणमा अति उत्तेजित भएर, भावनाले उत्प्रेरित हुन गएको मुटुको जोडदार धड्कनका साथ-साथै दुःसाहसको शिखरमा पुग्न सकेपछि उनले आफूलाई आएको कुनै एउटा अर्थहीन कुरा बिनालाज त्यस्तो बोलीमा बोल्दछिन् जुनचाहिँ एउटा रित्तो आत्माद्वारा चङ्गाइ पाएको व्यक्तिबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ। [Irenaeus Against Heresies]
शुरूका मण्डलीका बाइबलीय (orthodox, शास्त्रसम्मत) अगुवाहरूले अन्य भाषामा बोलिएका यस्ता भावनामय विस्फोटहरू परमेश्वरबाटका होइनन् भनी जानेका थिए। यसलाई प्रोत्साहन दिनेहरू त झूटा शिक्षकहरू थिए।
३) फ्रान्समा सत्रौं शताब्दीका सेभेनोल पादरीहरू (Cevenol priests) ले पनि अन्य भाषाहरूमा बोल्थे। तिनीहरू झूटा शिक्षकहरू (heretics) हुन् भनी चिनिएका थिए किनभने तिनीहरूका भविष्यवाणी पूरा भएनन्। [John MacArthur Jr., The Charismatics, p. 169.]
४) “शेकरहरू” (Shakers) भनिने समूह ई सं १७४७ मा एउटा स्त्रीद्वारा शुरू भएको हो। शिक्षामा उनी गञ्जागोल थिइन्, र उनले विशेष गरी ख्रीष्टको बारेमा झूटा धारणाहरू अपनाएकी थिइन्।
“भनिन्छ, शरीरलाई वशमा ल्याउनलाई, उनले अन्य भाषाहरूमा बोल्दै गरेका पुरूष र स्त्रीहरू नाङ्गै नचाउने अभ्यासको शुरूआत गरिन्।” [Charles Smith, Tongues in Biblical Perspective, pages 17-18.]
५) मर्मन (Mormon) चर्च नामक एउटा झूटा मण्डली (cult) भित्र अन्य भाषाहरूमा बोलिएका उदाहरणहरू भेटिन्छन्:
“जोसेफ स्मिथ (Joseph Smith) देखि लिएर, अर्थात् उनीहरूको शुरूआतदेखि नै मर्मनहरूले अन्य भाषा वर्तमान समयमा पनि दिइने वरदान हो भन्ने मान्दै आएका छन्। साल्ट लेक सीटी (Salt Lake City) मा उनीहरूको भवन (टेम्पल) समर्पण गरिँदा, सयौं एल्डरहरूले अन्य भाषाहरूमा बोले।” [Charles Smith, Tongues in Biblical Perspective, page 18.]
६) उन्नाइसौं शताब्दीमा एडवर्ड इर्भिङग (Edward Irving) का अनुयायीहरूले अन्य भाषामा बोले। यिनीहरूले पवित्र शास्त्रलाई खण्डन गर्ने प्रकाशहरूलाई, विफल भएका भविष्यवाणीहरूलाई र विविध गलत शिक्षाहरूलाई अँगालेका थिए। [See John MacArthur Jr., The Charismatics, p. 170 and see also Arnold Dallimore’s excellent biography, Forerunner of the Charismatic Movement–The Life of Edward Irving (Moody Press, 1983).]
७) आज, आफू ख्रीष्टियन हुँ भनी स्वीकार समेत नगर्नेहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्छन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ:
आज हैटी, ग्रीनल्याण्ड, माइक्रोनेसिया, एशिया, र उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाका झाँक्रीहरू अन्य भाषामा बोल्छन्। कतिपय समूहहरूले आफूहरूमा उन्मत्त अवस्था र उच्चारणहरू उत्पन्न गराउन लागू पद्धार्थको मदत लिन्छन्। भूडू अभ्यास गर्नेहरूले अन्य भाषामा बोल्छन्। बौद्धमार्गी र शिन्तो पूजाहारीहरूले अन्य भाषामा बोलेका सुनिएको छ। मुसलमानहरूले अन्य भाषामा बोलेका छन्, र एउटा प्राचीन हस्तान्तरित भनाइअनुसार महम्मद समेतले अन्य भाषामा बोले। [Charles Smith, Tongues in Biblical Perspective, pages 20-21. For further documentation of unsaved people speaking in tongues, look up the article on “glossolalia” in The Encyclopedia Britannica.]
८) खेदको कुरा, आज क्यारिज्म्याटिक लहरको लैलैमा लागेका थुप्रै व्यक्तिहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेका छन् यद्यपि उनीहरूसित मुक्ति वा अनुग्रहको सुसमाचार वा नया जन्मको बारेमा कुनै सुस्पष्ट ज्ञान छैन। उनीहरूले कुनै एउटा अनुभव त पाए तर अनन्त जीवन भने पाएका छैनन् (१ यूहन्ना ५:११-१२)। [क्यारिज्म्याटिक अभियानमा हुनेहरूमा आफ्नो मुक्तिका लागि केवल ख्रीष्टलाई मात्र उहाँमाथि भरोसा राखेका हुनाले साँच्ची नै ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेका व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्दछौं। साँच्चै मुक्ति पाएको भएर पनि शिक्षामा अलमल हुनु सम्भव छ।]
१६) आजको अन्य भाषाको अभ्यासमा गलती के छ (एक सारांश)?
१) क्यारिज्म्याटिक समूहहरूमा अन्य भाषा भनेको सबैले चाह गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ, तर नयाँ नियममा भने अन्य भाषा प्रत्येक विश्वासीलाई दिइने आत्मिक वरदान थिएन (१ कोरिन्थी १२:८-११,३०)। १ कोरिन्थी १२:२८ मा वरदानहरूको सूचीको पुछारमा उल्लेख गरिएको अन्य भाषा तुलनात्मक हिसाबले कम महत्त्वको वरदान थियो, यद्यपि यसको सही प्रयोग र सही अनुवादले उन्नती गराउँथ्यो।
२) अन्य भाषाहरूको बाइबलीय वरदान भनेको एउटा यस्तो अलौकिक क्षमता थियो जसमा एउटा व्यक्तिले आफूले कहिल्यै नसिकेको विदेशी भाषामा बोल्न सक्थ्यो। आजको अन्य भाषाको कथित वरदानको अभ्यासलाई भने अनुवाद गर्न सकिन्न, त्यसमा कुनै वास्तविक भाषा-तत्त्व नै छैन, त्यो एउटा अर्थहीन बकबक बोलिने उन्मत्त, भावनात्मक अनुभव मात्र हो।
३) सम्पूर्ण बाइबलभरि हेर्दा विश्वासीलाई अन्य भाषामा बोल्न आज्ञा दिइएको कतै पाइन्न, र नयाँ नियमको २७ ओटामा २४ ओटा पुस्तकहरूमा अन्य भाषाको वरदान सम्बन्धी एउटै पनि उल्लेख छैन।
४) इतिहासका सत्य-तथ्यले अन्य भाषाको सकली वरदान मण्डली इतिहासको प्रारम्भतिर नै बन्द भएको देखाउँछ। साथै यो वरदान आखिरी दिनहरूमा फेरी प्रकट हुनेछ भन्ने सङ्केत दिने कुनै त्यस्तो पद बाइबलमा छैन।
५) अन्य भाषाको वरदान एउटा अस्थायी, चिन्हरूपी वरदान (sign gift) थियो जसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्‍यो र त्यसपश्चात् त्यसको आवश्यकता नै रहेन, र त्यसैले त्यो दिइन बन्द भयो। अविश्वासी इस्राएललाई त्यो इन्साफको चिन्ह थियो, परमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रलाई पन्छाएर उहाँको मण्डली भनिने नयाँ योजनाको शुरुआत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत थियो त्यो। ए डी ७० पछि, अर्थात् रोमीहरूले यरूशलेमलाई ध्वस्त गरेदेखि यता, सकली अन्य भाषाको कतै उल्लेख पाइन्न, न ता बाइबलमा न ता बाह्य इतिहासको पन्नाहरूमा।
६) आज बोलिने कथित अन्य भाषा भने संसारलाई थाह भएकै विषय हो — यो एउटा यस्तो मानसिक अनुभव (psychological phenomenon) हो जसलाई शताब्दियौंदेखि झूटा-शिक्षाका समूहहरूले, मूर्तिपूजकहरूले, कल्टहरूले र अख्रीष्टियन समूहहरूले अभ्यास गर्दै आएका छन्।
७) अन्य भाषाहरू बोलिने आजको अधिकांश अभ्यास १ कोरिन्थी १४ अध्यायमा प्रतिपादित नियमहरूको विपरित भइरहेको पाइन्छ। तसर्थ आजको अन्य भाषा परमेश्वरबाटको हुन सक्दैन भन्ने यो अर्को लक्ष्यण हो। प्रेरित पावलले दिएका केही नियमहरू यस प्रकार छन्:
कुनै एउटा सभामा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्न नहुने (१ कोरिन्थी १४:२७)।
अन्य भाषामा बोल्नेहरूले एक्कैचोटि नभएर पालो-पालो गरी बोल्नुपर्ने (१ कोरिन्थी १४:२७)।
जब-जब अन्य भाषा बोलिन्थ्यो, तब-तब त्यसको अनुवाद पनि गरिनुपर्ने (१ कोरिन्थी १४:२८)।
स्त्रीहरूले सभामा अन्य भाषामा बोल्न नहुने (१ कोरिन्थी १४:३४-३५)।
तपाईं प्रायः जुनसुकै क्यारिज्म्याटिक सभामा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईंले यी नियमहरूलाई उल्लङ्घन भइरहेको पाउनुहुनेछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-10 10:41:002020-04-28 14:20:31अन्य भाषाको वरदान बन्द
February 9, 2020 /in ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू /by Pradesh Shrestha
७) अन्य भाषाहरूको वरदान के हो? वास्तविक भाषाहरू कि बुझ्न नसकिने उच्चारणहरू?
हामी सर्वप्रथम आजकल हुने गरेको अन्य भाषाहरूको अभ्यासलाई विचार गरौं। त्यहाँ वास्तवमा के बोलिन्छन्? साँच्चीकै भाषा कि अर्थहीन बकबक?
“क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले आफ्नो अन्य भाषालाई प्रार्थना गर्नका लागि परमेश्वरद्वारा दिइएको, सम्भवत: स्वर्गदूतको भाषाको रूपमा लिन्छन्। तर केवल बुझ्ने भाषामा परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्नेहरूका निम्ति र भाषाविदहरू (जोहरू यस विषयमा एकमत छन्) को जानकारी अनुसार अन्य भाषामा भाषाको कत्ति पनि चरित्र नरहेको पाइन्छ” (“क्यारिज्म्याटिक रिनुवल”, मार्च ७, १९८० को क्रिश्चियानिटी टुडेको पृष्ठ १६-१७ मा जे आइ प्याकरको लेखबाट)।
“विलियम समारिन, टोरोन्टो युनिभर्सिटीका भाषाविज्ञानका प्राध्यापक लेख्‍नुहुन्छ:
‘पाँच वर्षको अवधि लगाएर मैले इटाली, हल्याण्ड, जमाइका, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सभाहरूमा भाग लिएको छु। मैले पुरानो खाले पेन्टिकोस्टलहरू र नयाँ खाले पेन्टिकोस्टलहरूको अवलोकन गरेको छु। म निजी घरहरूमा हुने साना जमघटहरूमा पुगेको छु साथै बडेमाका सार्वजनिक सभाहरूमा पुगेको छु। मैले [न्यूयोर्कस्थित] ब्रङ्क्सका प्वेर्टो-रिकनहरू, आपलेचियनहरूका सर्प खेलाउनेहरू र लस-एन्जलसका रूसी मलाकन्सहरू जस्ता फरक-फरक संस्कृतिहरूका बीचमा पुगेको छु…मैले अन्य भाषा बोल्नेहरूसित अन्तर्वार्ता लिएको छु र अन्य भाषाको असंख्य नमुनाहरू रेकर्ड गरेको छु र तिनका विश्लेषण गरेको छु। हरेकमै ग्लोसोलेलिया [अन्य भाषा] भाषा विज्ञानको दृष्टिकोणमा अर्थहीन भेटियो। सतहमा मिल्दोजुल्दो रूप भए तापनि ग्लोसोलेलिया वास्तवमा भाषा होइन।'” (द क्यारिज्म्याटिक्स्, पृष्ठ १६२ मा जन म्याकआर्थरद्वारा उद्धृत)।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, तपाईं क्यारिज्म्याटिक सभामा जानुहोस् जहाँ मानिसहरू अन्य भाषाहरूमा बोलिरहेका छन्, टेप रिकर्डरमा अन्य भाषाका बोलिहरूलाई रिकर्ड गर्नुहोस् र टेप रिकर्डरलाई सर्वोत्कृष्ट भाषाविदहरूकहाँ लगेर उनीहरूलाई अन्य भाषाका ती उच्चारणहरू अध्ययन गर्न दिनुहोस्। तब उनीहरूको निष्कर्ष के हुनेछ? उनीहरूको निष्कर्ष यो हुनेछ, यी उच्चारणहरू अर्थहीन छन्, यी कुनै भाषा होइनन्।
यी कथित “अन्य भाषाहरू” त बाइबलका पन्नाहरूमा वर्णित अन्य भाषाहरू भन्दा ज्यादै फरक छन्। यस बारेमा चाबी खण्डचाहिँ प्रेरित अध्याय २ मा पाइन्छ जहाँ अन्य भाषाहरूको वरदानको पहिलो ऐतिहासिक प्रयोगको बयान छ। पेन्टिकोस्टको त्यस दिनमा के बोलिएका थिए त? यो निर्विवाद छ, त्यस दिन वास्तविक भाषाहरू नै बोलिएका थिए:
“तर जब त्यो आवाज भयो, तब एउटा भीड भेला भयो, र ती छक्कै परे; किनकि हरेक मानिसले उसको आफ्नै भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेका सुन्यो…अनि कसरी हामीमध्ये हरेकले जुन भाषामा हामी जन्म्यौं, त्यसैमा बोलेको सुन्दैछौं ता?” (प्रेरित २:६,८)।
यस खण्डबाट हामी बाइबलीय अन्य भाषाको वरदानको परिभाषा नियमपूर्वक स्थापित गर्न सक्दछौं। अन्य भाषाको वरदान भनेको आफूले कहिल्यै नसिकेको भाषालाई बोल्न सक्ने अलौकिक क्षमता हो। यो अलौकिक थियो किनभने “आत्माले तिनीहरूलाई बोली दिनुभएअनुसार” (पद ४) थियो यो र उहाँबेगर यो हुन नै सक्दैनथ्यो। यो वास्तविक भाषा थियो “किनकि हरेक मानिसले उसको आफ्नै भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेका सुन्यो” (पद ६)। ती वक्ताहरू आफूले कहिल्यै नसिकेका भाषाहरूमा बोल्दैथिए:
“अनि तिनीहरू सबै छक्कै परेर आपसमा यसो भन्दै अचम्म माने: “हेर, के यी बोल्नेहरू सबै गालीली होइनन् र?” (पद ७)।
अर्को चाबी खण्ड हो १ कोरिन्थी १४। अन्य भाषाहरू वास्तविक भाषाहरू थिए भन्ने तथ्यलाई समर्थन गर्ने दुइटा मजबुत तर्कहरू यस अध्यायमा भेटिन्छन्:
तर्क #१ – अन्य भाषाहरूलाई अनुवाद गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तथ्य
१ कोरिन्थी १४:५,१३,२७,२८ मा हेर्नुहोस्। कुनै पनि विदेशी बोलीको अर्थ यदि बुझिने हो भने त्यसलाई अनुवाद गरिनुपर्दछ। त्यसैले त संयुक्त राष्ट्र संघका अधिवेशनहरूमा दोभाषेहरू (interpreters) प्रयोग गरिन्छन्। यी निपुण अनुवादकहरूले भाषाको रूपान्तर गरिदिएर विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई निजहरूले नबुझ्ने भाषामा बोलिएका कुरा बुझ्नलाई सेवा पुर्‍याउँछन्। मत्ती १:२३ मा “अर्थ” (interpretation) को माने “अनुवाद” हो भनेर देख्‍न सकिन्छ (हिब्रूमा “इम्मानुएल” लाई नेपालीमा “परमेश्वर हामीसित” भनेर अनुवाद गरिन्छ)।
हाम्रो तर्क यत्ति हो: वास्तविक भाषाको मात्र अर्थ हुन्छ अर्थात् त्यसलाई अनुवाद गर्न सकिन्छ। उत्तेजित उच्चारणहरू वा अर्थहीन ध्वनीहरू वा अर्थ नभएका बकबकलाई अनुवाद गर्न सकिन्न। उदाहरणको लागि “अमेजिङ्ग ग्रेस” शीर्षक भएको आत्मिक गीत नेपालीमा अनुवाद गरिन सकियो किनकि उक्त गीत एउटा वास्तविक भाषा (अङ्ग्रेजि) मा रचना गरिएको थियो। तर “फा ला ला ला ला ला ला ला ला” भनेर गाइने एउटा ख्रीष्टमस गीत भने अनुवाद गर्न सकिन्न किनकि यी स्वरहरू अर्थहीन छन्, सायद यीचाहिँ एक रमाइलो मानिरहेको व्यक्तिको भावुक अभिव्यक्ति भने होलान्।
निष्कर्ष: वास्तविक भाषाहरूको मात्र अर्थ बताउन सकिन्छ वा अनुवाद गर्न सकिन्छ। १ कोरिन्थी १४ अध्यायका अन्य भाषाहरू अनुवाद गर्न सकिन्थे। तसर्थ १ कोरिन्थी १४ अध्यायका अन्य भाषाहरू वास्तविक भाषाहरू थिए।
तर्क #२ – अन्य भाषाहरूमा शब्दहरू थिए भन्ने तथ्य
१ कोरिन्थी १४:१९ मा पढ्नुहोस् — “तरै पनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा ता बरु अरूलाई पनि सिकाउन सकूँ भनेर आफ्नो समझले पाँचओटा शब्द बोल्नु नै म चाहन्छु।” यस पदले ज्यादै स्पष्ट देखाउँछ कि अन्य भाषाहरूको वरदानमा “शब्द” हुन्थे। शब्द के हुन् त? अर्थ बोकेका स्वर हुन् ती। ती अर्थ बोक्ने माध्यम हुन् जसद्वारा हामी एक-अर्कासँग संवाद गर्दछौं। बाइबलमा अन्य भाषाहरू कुनै उत्तेजित उच्चारणहरू थिएनन्, ती त शब्दहरू थिए। अर्थहीन आवाज थिएनन् ती, ती त शब्दहरू थिए। अर्थ नभएक बकबक थिएनन् ती, ती त शब्दहरू थिए। उत्तेजित उच्चारणहरू थिएनन् ती, ती त अर्थपूर्ण उच्चारणहरू थिए।
अन्य भाषाहरूको वरदान विश्वमा बोलिने वास्तविक भाषाहरू थिए भन्ने कुरालाई समर्थन गर्ने थप तर्कहरूका लागि अङ्ग्रेजी पाठकले बाइबलीय अन्य भाषाहरू वास्तविक भाषाहरू थिए – १२ ओटा कारणहरू (Twelve Reasons Why Biblical Tongues Were Real Languages) भन्ने लेखलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
८) के नयाँ नियमका समयमा हरेक विश्वासीले अन्य भाषाहरूमा बोल्नैपर्छ भन्ने धारणा थियो?
के अन्य भाषाहरूको वरदान हरेक विश्वासीलाई दिइन्थ्यो? के अन्य भाषाहरू हरेक विश्वासीले बोल्नुपर्छ भनेर अपेक्षा गरिन्थ्यो?
१ कोरिन्थी १२:४-११ बाट हामी यो सिक्छौं हरेक विश्वासी जनसित एक न एक आत्मिक वरदान हुन्छ तर हरेक विश्वासीको वरदान एउटै हुँदैन। केही विश्वासीहरूसित अन्य भाषाहरूको दान थियो (पद १०) तर सबैसित होइन। १ कोरिन्थी १२:३० मा प्रश्‍न गरिएको छ, “के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्?” यो यस्तो खाले प्रश्‍न हो जसले नकारात्मक जवाफको माग गर्दछ। यसलाई नेपालीमा यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ, “के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन् र?” यसको जवाफ हुन्छ, “बोल्दैनन्!” सबैले नै अन्य भाषाहरूमा बोल्दैनन्। यो दान कतिसित थियो तर सबैसित थिएन। यसर्थ नयाँ नियमको समयमा अन्य भाषाहरूको वरदान कतिपयलाई दिइन्थ्यो तर सबैलाई होइन।
त्यसो भए क्यारिज्म्याटिक समूहहरूमा किन सबैलाई नै अन्य भाषाहरूमा बोल्न अर्ती दिइन्छ र कर लगाइन्छ? यो सबैलाई दिइने वरदान होइन भने किन सबैलाई यसै गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिइन्छ?
९) अन्य भाषाहरूमा बोल्नुपर्छ भनेर विश्वासीलाई आज्ञा दिइएको भए सो कहाँ उल्लेख छ त?
त्यस्तो आज्ञा कतै छ त? “पवित्र आत्माले भरपूर होओ” (एफेसी ५:१८) भन्ने आज्ञा त छ। “आत्मामा हिँड” (गलाती ५:१६) भन्ने आज्ञा त छ। तर अन्य भाषाहरूमा बोल्नका लागि भने कतै आज्ञा दिइएको पाइँदैन। त्यस्तो आज्ञा कतै भेटिएला भन्ने आशा गर्न पनि मिल्दैन। किनभने जुन काम गर्न सकोस् भनेर परमेश्वरले कसै-कसैलाई मात्र क्षमता दिनुभयो, त्यही काम गरोस् भनेर उहाँले सबै विश्वासीहरूलाई कसरी आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो र?
हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरूलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छौं: “यदि तपाईंहरूले मैले अन्य भाषामा बोल्नुपर्छ भन्ने एउटै मात्र आज्ञा परमेश्वरको वचनबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने म खुसीसित अन्य भाषामा बोल्नलाई इच्छुक बन्नेछु।”
अन्य भाषाहरूमा बोल्न सिक्न मदत गर्ने प्रयासमा क्यारिज्म्याटिक अगुवाहरूले मानिसहरूलाई के-कस्ता निर्देशन दिने गर्छन्? एउटा उदाहरण यस प्रकार छ:
“[आफ्नो मातृभाषा] को एक शब्द पनि नबोल्ने अठोट गर्नुहोस् (किनभने एकैचोटि दुइटा भाषामा बोल्न सकिन्न)। आफ्नो स्वरको आवाज उठाउनुहोस् अनि पवित्र आत्माले तपाईंलाई नयाँ भाषाको उच्चारण अलौकिक तवरले दिनुहुनेछ। ‘के भन्ने होला’ भनेर फिक्री नगर्नुहोस् किनकि यो भाषा अलौकिक तवरले बोलिन्छ र यो भाषा मन वा मस्तिष्कबाट आउने कुरो होइन तर पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर तपाईंको आत्माबाट आउने कुरो हो। विश्वासमा बोली-संयन्त्र (स्वर यन्त्र, जिभ्रो, ओठहरू) लाई क्रियाशील बनाउनुहोस् जसरी कुनै भाषामा बोल्दा ती क्रियाशील गरिन्छन् अनि पवित्र आत्माले, तपाईंभित्र अब रहनुभई, तपाईंलाई बोली दिनुहुनेछ।” [Fromatract published by Dr. Hobart Freeman, Faith Ministries and Publications (Warsaw, Indiana)]
प्राचीन मण्डली इतिहासको पन्नामा पाइने अर्को उदाहरण यस प्रकार छ:
मार्कस: “‘आफ्नो मुख खोल्नू, तिमीलाई जे आउँछ त्यही बोल्नू।’ यस वचनको कारण घमण्डले फुलेर, आफूले नै अगमवाणी बोल्ने भएँ भन्ने प्रतिक्षाले प्राणमा अति उत्तेजित भएर, भावनाले उत्प्रेरित हुन गएको मुटुको जोडदार धड्कनका साथ-साथै दु:साहसको शिखरमा पुग्न सकेपछि उनले आफूलाई आएको कुनै एउटा अर्थहीन कुरा बिनालाज त्यस्तो बोलीमा बोल्दछिन् जुनचाहिँ एउटा रित्तो आत्माद्वारा चङ्गाइ पाएको व्यक्तिबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ।” [Irenaeus Against Heresies]
आफूले बोल्नुपर्ने के हो, त्यसको विचारै नगर्नू अरे? आफ्नो मन-मस्तिष्क प्रयोग नगर्नु अरे? के यस्तो सल्लाह पनि बुद्धिमानी हुन सक्छ?
१०) नयाँ नियमको समयमा अन्य भाषाहरूको वरदान कत्तिको महत्त्वपूर्ण थियो?
“म मेरा परमेश्‍वरलाई धन्यवाद चढाउँछु — तिमीहरू सबैभन्दा बढी म भाषाहरू बोल्दछु; तरै पनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा ता बरु अरूलाई पनि सिकाउन सकूँ भनेर आफ्नो समझले पाँचओटा शब्द बोल्न नै म चाहन्छु” (१ कोरिन्थी १४:१८-१९)।
गजबको तुलना गरिएको छ यहाँ! बुझ्न सकिने पाँचओटा शब्द नै अन्य भाषामा बोलिने दस हजार शब्द भन्दा उत्तम हुन्छन्! प्रवचनलाई पाँच शब्दमा सीमित गर्न भनी कुनै प्रचारकलाई अनुरोध गर्नु कस्तो होला! (१) एकदम (२) थोरै (३) मात्र (४) भन्न (५) सकिन्छ! तर ती पाँच शब्द नै अन्य भाषामा बोलिने दस हजार शब्द भन्दा बढी लाभदायक हुन्छन्।
दस हजार शब्द बोल्न करिब डेढ घण्टा समय लाग्छ। पाँच शब्द बोल्न दुई सेकेन्ड मात्र लाग्छ। दुई घण्टा लगाएर नबुझिने शब्दमा बोल्नु भन्दा दुई सेकेन्डमा “ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो” (१ कोरिन्थी १५:३) भनेर बताउन नै पावल रोज्दछन्। जब त्यो बुझ्न सकिँदैनथ्यो त्यस बेला अन्य भाषाको कुनै महत्त्व रहँदैनथ्यो। यसैकारण अन्य भाषाको अनुवाद अनिवार्य गरिनुपर्थ्यो।
१ कोरिन्थी १४ मा पावलले अन्य भाषाको वरदान भन्दा भविष्यवाणीको वरदान बढी मूल्यवान रहेको बताउँछन् (१-५ पदहरू पढ्नुहोस्)। पावलले १ कोरिन्थी १२:२८ मा केही वरदानहरूलाई तिनका तुलनात्मक महत्त्वको आधारमा सूचीत गरेको देखिन्छ: “अनि परमरेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभएको छ: पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेश्रो शिक्षकहरू; त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाइ गर्ने कामहरू र किसिम-किसिमका भाषाहरू।” अन्य भाषा सबभन्दा पुछारमा उल्लेख गरिएको छ।
११) के कुनै वरदानहरू अस्थायी थिए?
के त्यस्ता कुनै वरदानहरू थिए जसलाई परमेश्वरले आज दिने गर्नुहुन्न? निम्न उल्लेखित दुइटा वरदानहरू अस्थायी वरदानका उदाहरण हुन्:
१) प्रेरितको वरदान
आज मण्डलीमा कोही पनि प्रेरित छैनन्। यस तथ्यलाई प्रायः सबैले स्वीकार्छन्, धेरै पेन्टिकोस्टल अध्येताहरूले समेत। मर्मनहरू (Mormons) ले र साथै अन्य केही समूहहरूले आज पनि प्रेरितहरू छन् भनेर विश्वास गरे तापनि अधिकांशले भने प्रेरितहरू पहिलो शताब्दीका चुनिएका र दानयुक्त व्यक्तिहरूको एक विशिष्ट र ज्यादै भिन्न समूह थियो भनी स्वीकार्छन्। १ कोरिन्थी ९:१ मा एउटा साँचो प्रेरित भनेको बौरिउठ्नुभएको ख्रीष्टलाई आफ्नै आँखाले देख्‍ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत दिइएको पाइन्छ। आजका विश्वासीहरूको सवालमा यो साँचो हुने कुरै भएन (यूहन्ना १६:१०; १ पत्रुस १:८)।
२) भविष्यवाणीको वरदान
आज मण्डलीमा परमेश्वरद्वारा दानयुक्त भविष्यवक्ता (अगमवक्ता) हरू छैनन् यद्यपि त्यहाँ थुप्रै झूटा भविष्यवक्ताहरू भने छन्। प्रायः सबै क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरू भविष्यवाणीको वरदान आजको लागि पनि हो भनेर विश्वास गर्दछन्। यस विषयमा #१३ मा चर्चा गरिनेछ। [धेरै वरदानहरूका अस्थायी चरित्रको बारेमा जर्ज जेलरद्वारा लिखित God’s Gift of Tongues, pages 113-116 हेर्नुहोस्]
१२) भविष्यवक्ताको परिभाषा के हो?
“परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने क्षमता” [बिल्ली ग्राहाम, पवित्र आत्मा, पृष्ठ १३९]
“भविष्यवक्ताको वरदान वास्तवमा परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्ने क्षमता थियो…त्यसैले यो वरदानचाहिँ मानिसहरूका सामु बोल्ने, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्ने क्षमता थियो जसमा कहिलेकाहीँ भविष्यको कुरा बताउन सक्ने तत्त्व समेत समावेश हुन्थ्यो।” [जन म्याकार्थर जुनियर, द क्यारिज्म्याटिक्स, पृष्ठ १६४। जन म्याकार्थरको शिक्षाअनुसार परमेश्वरले आज अगमवाणीको वरदान दिनुहुन्छ तर अगमवक्ताहरू भने आज छैनन्। उनको शिक्षाअनुसार अगमवक्ताको वरदान (एफेसी ४:११) आज मण्डलीमा पाइँदैन तरैपनि अगमवाणीको वरदान भने पाइन्छ। १ कोरिन्थीको उनको टिप्पणी, पृष्ठ ३२२-३२४ मा हेर्नुहोस् र एफेसीको टिप्पणी पृष्ठ १४१-१४२ मा। यसअनुसार एउटा व्यक्तिसित अगवाणीको वरदान हुन सक्छ र उसले अगमवाणी कहन सक्छ तर ऊ अगमवक्ता होइन। यसको तात्पर्य चाहिँ एउटा व्यक्तिसित शिक्षाको वरदान भएर पनि ऊ शिक्षक नहुन सक्छ वा पास्टरको काम गर्ने वरदान भएर पनि पास्टर नहुन सक्छ।]
“त्यसैसँग कुरा गर् र त्यसले भन्नुपर्ने कुरा तैंले बता, र म तिमीहरू दुवैसँग हुनेछु र तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हो सो बताउनेछु। त्योचाहिँ तेरो निम्ति मानिसहरूसित बोल्नेछ, र तेरो मुखझैं हुनेछ, र तँचाहिँ त्यसको निम्ति ईश्वरतुल्य हुनेछस्” (प्रस्थान ४:१५-१६)।
यसलाई अङ्ग्रेजि किङ्ग जेम्सबाट यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ:
“तिमीले त्यससँग बात गर्नेछौ र त्यसको मुखमा वचनहरू राखिदिनेछौ, र म तिम्रो मुखसित र त्यसको मुखसित हुनेछु, र तिमीले के गर्नपर्ने हो म तिमीलाई सिकाउनेछु। त्योचाहिँ सबै मानिसहरू तर्फ तिम्रो प्रवक्ता हुनेछ, र त्यो, अँ त्योचाहिँ तिमीलाई तिम्रो मुखको सट्टामा हुनेछ, र तिमीचाहिँ त्यसको निम्ति परमेश्वरको सट्टामा हुनेछौ।”
“तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “हेर्, मैले तँलाई फारोको निम्ति ईश्वरतुल्य बनाएको छु, र तेरो दाज्यू हारून तेरो प्रवक्ता [हिब्रूमा नावी अर्थात् अगमवक्ता] हुनेछ। म जे तँलाई हुकुम गर्नेछु तैंले त्यही बता, र तेरो दाज्यू हारूनले इस्राएलीहरूलाई त्यसको देशबाट जान दिओस् भनी फारोलाई भन्नेछ” (प्रस्थान ७:१-२)।
हारून मोशाका निम्ति प्रवक्ता तुल्याइए। अगमवक्ता र परमेश्वरको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै हारून र मोशाको सम्बन्ध तुल्याइयो। यसको मतलब? हारूनले मोशाका वचनहरू बोल्थे जसरी अगमवक्ताले परमेश्वरका वचनहरू बोल्थे। हारून मोशाको मुख तुल्याइए जसरी अगमवक्ता परमेश्वरको मुख तुल्याइएका हुन्थे्। हारून मोशका प्रवक्ता थिए जसरी अगमवक्ता परमेश्वरका प्रवक्ता हुन्थे, परमेश्वरको मुखको रूपमा काम गर्थे, परमेश्वरकै सन्देश घोषणा गर्ने काम गर्थे (“परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ!”)। अगमवक्ताको ईश्वरीय परिभाषा यही हो। तसर्थ अगमवाणीचाहिँ परमेश्वरबाटको दान हो जसद्वारा एक व्यक्तिले परमेश्वरको सन्देश घोषणा गर्न सक्दछ र परमेश्वरकै वचन बोल्न सक्दछ। प्रत्येक अगमवाणीले यो छाप बोकेको हुन्छ — “किनकि परमप्रभुको मुखले बताएको छ!”
नयाँ नियमका निम्न खण्डहरूबाट अगमवाणीको दान बुझ्न हामीलाई मदत मिल्छ: “किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले” (२ पत्रुस १:२१)। पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर नै अगमवक्ता (भविष्यवक्ता) हरूले ठीक त्यही कुरा बोले (र लेखे) फलस्वरूप उनीहरूले जुन परमेश्वरले चाहनुभएको थियो। त्यो परमेश्वरकै सन्देश थियो, परमेश्वरकै वचन थियो। “अब भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुले भन्नुभएको कुरा पूरा होओस् भनेर यो सब भएको थियो” (मत्ती १:२२)। बोल्नेचाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कसरी बोल्नुभयो? उहाँले अगमवक्ताको मुख प्रयोग गर्नुभयो (यस उदाहरणमा यशैयाको मुखलाई)। त्यो परमेश्वरकै सन्देश र वचन थियो तर एउटा मान्छेको मुखद्वारा घोषणा गरियो।
अगमवक्ता सयमा सय प्रतिशत अचूक हुनुपर्थ्यो (हेर्नुहोस् व्यवस्था १८:२१-२२)। किन? किनकि परमेश्वर सयमा सय प्रतिशत अचूक हुनुभएकोले र साँचो अगमवक्ता परमेश्वरकै मुख भएकोले। यदि परमेश्वरको सन्देश अगमवक्ताको मुखद्वारा घोषणा गरिन्छ भने त्यो सयमा सय प्रतिशत अचूक हुन्छ। अगमवक्ताले अगमवक्ताको हैसियतमा बोल्दाखेरि उसले परमेश्वरको वचन बोल्दछ (“परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ!”) , र त्यो सन्देश त्रुटिरहित हुन्छ र सयमा सय प्रतिशत अचूक हुन्छ। एउटा शिक्षक (वा पास्टर-शिक्षक) ले परमेश्वरबाट दिइसकिएको परमेश्वरको वचनको व्याख्या गर्दछ। सबैभन्दा अस बाइबल शिक्षक पनि त्रुटिरहित हुँदैन, ऊ चुक्न सक्दछ।
अगमवाणी (भविष्यवाणी) के हो? अगमवाणी भनेको प्रेरणायुक्त बोली हो। यो बोली वा लिखतमा परमेश्वरकै वचन हो। मीकायाको परिभाषाअनुसार अगमवाणी के हो, २ इतिहास १८:१३ मा हेर्नुहोस्।
१३) के वर्तमान समयमा पनि साँचो अगमवक्ताहरू छन्?
अगमवाणीको दान आज पनि दिइँदै छ भन्ने धेरैजनाको दाबी छ। यदि यो साँचो हो भने यसको तात्पर्य के हुनेथ्यो विचार गरौं त। यसको मतलब परमेश्वरले आज पनि आफ्नो वचन दिँदैहुनुहुन्छ र त्यसैले पवित्रशास्त्र अपूरो छ भन्ने हुन्थ्यो। यदि आज पनि वर्तमान अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले थप प्रकाश दिँदै हुनुहुन्थ्यो भने बाइबलका ६६ पुस्तकहरू पर्याप्‍त छैनन् भन्ने बुझिन्थ्यो। यी आधुनिक अगमवक्ताहरूले आपूर्ति गरिदिने अत्यावशक सत्यताहरू र तथ्यहरूबिना बाइबल अपूरो छ भन्ने बुझिन्थ्यो। बाइबल पर्याप्‍त छैन भन्ने बुझिन्थ्यो! हामीलाई बाइबलबाहेक यी नयाँ अगमवाणीहरू चाहिन्थ्यो!
अगमवाणीको वरदान शुरूको मण्डलीलाई आवश्यक रहेको तर बाइबल पूरा भएपछि आवश्यक नरहेको एउटा अस्थायी वरदान थियो भन्ने स्पष्ट सङ्केतहरू नयाँ नियममा पाइन्छन्। [पाठकले अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध First Corinthians 14 and Temporary Gifts भन्ने लेखलाई अध्ययनलाई गर्न सक्नुहुन्छ।]
प्रेरितहरू र नयाँ नियमका अगमवक्ताहरू जगका मानिसहरू थिए भन्ने कुरा एफेसी २:२० ले सिकाएको छ: “अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ, जसको कुनाढुङ्गाचाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ।” जग भनेको निर्माणको पहिलो चरणमा एकैपटक मात्र बसालिने कुरा हो। जगलाई फेरि-फेरि बसालिने काम गरिँदैन। यी मानिसहरू जगमा मानिस थिए किनकि उनीहरूद्वारा नै हामीले नयाँ नियमका लेखोटहरू प्राप्‍त गरेका हौं। जगलाई फेरि बसाल्न आवश्यक छैन तर जगमाथि चाहिँ बसाल्न खाँचो छ। सम्भवत: आज परमेश्वरको निर्माण कार्य मानौं “धुरी-चरण” मा पुगिसकेको हुन सक्छ, र चाँडै नै आखिरी “जिउँदो पत्थर” (१ पत्रुस २:५) लाई त्यसको ठाउँमा राखिन सक्छ अनि तब ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीलाई आफूकहाँ लिनलाई आउनुहुनेछ (यूहन्ना १४:१-३; १ थेस्सलोनिकी ४:१३-१८)।
अगमवाणीको वास्तविक वरदान बितेर जानेछ भन्ने सङ्केत २ पत्रुस २:१ ले दिएको देखिन्छ। “तर जसरी मानिसहरूका बीचमा झूटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे, उसरी नै तिमीहरूका बीचमा पनि झूटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिनीहरूलाई किन्नुहुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्‍त तवरले नाश पार्ने झूटा शिक्षाहरू भित्र हुल्नेछन्, र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउँछन्।”
यहाँ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्:
“झूटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे”
“झूटा शिक्षकहरू हुनेछन्”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-09 18:35:562020-04-28 14:20:31अन्यभाषा, अगमवाणी
क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले प्रायः यो प्रश्‍न सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको यस प्रश्‍नको तात्पर्य वास्तवमा यो हो — “के तपाईंले आत्माको बप्‍तिस्मा पाउनुभयो, अन्य भाषा बोल्ने जस्ता क्यारिज्म्याटिक अनुभव पाउनुभयो?”
हामी त्यस आधारभूत प्रश्‍नमा नै फर्कौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलले दिने जवाफ के हो त? १ कोरिन्थी ६:१९-२० अनुसार कोरिन्थका सबै विश्वासीहरूभित्र, अँ, शरीरअनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू (१ कोरिन्थी ४:१-३) भित्र समेत, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो — “के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ।” उनीहरूले पवित्र आत्मालाई नपाएका भए कसरी उहाँ उनीहरूभित्र हुन सक्नुहुन्थ्यो र? यो प्रस्ट छ, तिनीहरूले जुन घडी मुक्ति पाए त्यही घडी नै उनीहरूले पवित्र पाएका थिए।
यूहन्ना ७:३८-३९ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा पाउने विषयमा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यसमा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मा पाइसक्नुभएको छ। तसर्थ, चाबी प्रश्‍न “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” भन्ने नभएर “के तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो?” भन्ने हो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १:१२)
“पवित्र आत्मा मभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी जान्दछु?” क्यारिज्म्याटिक नवीकरण (Charismatic Renewal) को जवाफ छ — “पवित्र आत्माको बप्‍तिस्माले अर्थात् एउटा यस्तो शक्तिशाली अनुभवले जसले यसको प्रापकलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउँदछ” (रिचार्ड कबीडो, दि न्यू क्यारिज्म्याटिक्स् प्रथम संस्करण, पृष्ठ २)।
अर्को शब्दमा, “यो साँचो हुनुपर्छ किनकि मैले त्यो अनुभव गरेको छु। ममा त्यो भावना आएकै हो। यो त म आफैले अनुभव गरेको कुरा हो।”
“तर साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन।”
यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ एक ख्रीष्टियन होइन। यदि म मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भने मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म यो कसरी जान्दछु? म यो जान्दछु, किनभने परमेश्वले सो भन्नुभएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छन् (यूहन्ना ७:३९)। पावल भन्छन्, “हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ” (२ तिमोथी १:१४) अनि यो कुरा परमेश्वरको रगतले किनिएको हरेक जनको सम्बन्धमा साँचो हुन्छ। परमेश्वरको परिभाषा (१ कोरिन्थी ६:१९, रोमी ८:९, यूहन्ना ७:३९ आदि) अनुसार ख्रीष्टियन भनेको त्यो व्यक्ति हो जसभित्र पवित्र आत्माले बास गर्नुहुन्छ अर्थात् जसले पवित्र आत्मा पाइसकेको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनु तर पवित्र आत्मा नपाएको हुनु असम्भव कुरा हो। पवित्र आत्माको प्राप्‍ति र उहाँको हामीभित्रको उपस्थिति कुनै आत्मगत (subjective) र शंकास्पद अनुभवमा आधारित छैन। यो त परमेश्वरको वचनको स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छ।
३) मुक्ति पाउनुहुँदा के तपाईंले पवित्र आत्मा पनि पाउनुभयो?
के तपाईंले मुक्ति पूर्ण रूपमा पाउनुभएको छ कि तपाईंले केही कुरा पाउन अझ बाँकी नै छ? परमेश्वरको वचनअनुसार हाम्रो मुक्ति एक पूर्ण मुक्ति हो। जुनबेला तपाईंले विश्वासद्वारा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यसबेला तपाईंले ख्रीष्टसँगै पाइने सबै कुराहरू प्राप्‍त गरिसक्नुभयो, जस्तै —
तपाईंले पापहरूका पूर्ण क्षमा पाउनुभयो (एफेसी १:७)
तपाईं ख्रीष्टको शरीरको एउटा अङ्ग बन्नुभयो (१ कोरिन्थी १२:१३)
तपाईं परमेश्वरको परिवारको एउटा सदस्य बन्नुभयो (यूहन्ना १:१२)
तपाईंले अनन्त जीवनको वरदान पाउनुभयो (१ यूहन्ना ५:११-१२)
अनि अरू थुप्रै कुराहरू पाउनुभयो!!
[निम्न सामग्रीलाई अध्ययन गर्नुहोस्: मैले मुक्ति पाएको दिनदेखि म के कस्ता कुराहरूका भागीदार बनेको छु — २१५ ओटा सत्यताहरू]
हामीले पवित्र आत्मालाई मुक्ति पाएकै घडीमा पाउँछौं कि मुक्ति पाएको केही समय पछि पाउँछौं? रोमी ५:५ मा यसको जवाफ पाइन्छ — “अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनभने हामीलाई दिइनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयहरूमा खन्याइएको छ।” पवित्र आत्मा हाम्रो मुक्ति प्राप्‍तिकै घडीमा दिइनुभएको थियो।
हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरू “फुल गस्पेल” (पूर्ण सुसमाचार) को प्रायः कुरा गर्छन्। उहाँहरूको विचारमा अरूहरूको सुसमाचार अपूर्ण छ — “केवल ख्रीष्ट र क्रूसको प्रचार पर्याप्‍त छैन। ख्रीष्टमा सरल रूपमा मुक्ति पाउनु पर्याप्‍त होइन। तपाईंहरूलाई अझ अरू कुराको आवश्यकता छ। तपाईंहरूले अन्य भाषा बोल्ने आदि जस्ता पेन्टिकोस्टको अनुभव पाउन खाँचो छ।” तर यस्तो भनाइलाई १ कोरिन्थी २:२ सित तुलना गर्नुहोस्।
जवाफमा हामी भन्छौं, उल्टो क्यारिज्म्याटिकहरूसँग नै पूर्ण मुक्ति नभएको जस्तै देखिन्छ। त्यसमा घटी छ, अभाव छ। त्यसमा केही अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, पवित्र आत्मा नपाइकनै एक व्यक्तिले मुक्ति पाउन सक्छ। मुक्ति पाएर पनि एक व्यक्तिले केही आवश्यक दानहरू नपाएको हुन्छ, अरे।
येशू ख्रीष्टमा पाइने मुक्ति एक पूर्ण र सिद्ध मुक्ति हो। ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा एउटा व्यक्तिले ख्रीष्टको साथ-साथ पाइने सबै कुराहरू प्राप्‍त गर्दछ। “उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्‍नुभएन, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनुभयो त कसरी उहाँले उहाँको साथमा सबै कुराहरू पनि हामीलाई सित्तैमा दिनुहुनेछैन र (रोमी ८:३२)?” ख्रीष्टियन जीवन जिउने चाबी थप वरदान र आशिषहरू पाउन खोज्नु होइन। ख्रीष्टियन जीवनको चाबी त ख्रीष्टमा बढ्दै जानु र उहाँमा हामीलाई सित्तैंमा दिइएका कुराहरू पत्ता लगाउँदै जानु हो। ख्रीष्टियन जीवनको चाबी त हामी ख्रीष्टमा कति धनाढ्य छौं भनेर सिक्नु हो। आत्मिक करोडपतिहरू भएर पनि प्रायः जसो ख्रीष्टियनहरूले सो कुरा जानेका छैनन्।
हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरूलाई म एउटा चुनौति दिन चाहन्छु — “म एक विश्वासीलाई आवश्यक परेको कुनचाहिँ कुरा छ होला जुन कुरा मैले येशू ख्रीष्टमा पाइसकेको छैन र पाउन बाँकी नै छ? मलाई साँच्चै कुन कुरा आवश्यक छ जुन कुरा मैले ख्रीष्टमा पाइसकेको छैन?”
४) के विश्वासीहरूले “दोस्रो आशिष” को खोजी गर्नुपर्छ?
“हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य होऊन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुभएको छ” (एफेसी १:३)।
सबै आत्मिक आशिषहरू हाम्रा भइसकेका छन् र ती सब ख्रीष्टमा पाइन्छन्। [यीमध्ये केही आशिषहरूको झलक पाउनलाई पाठकले निम्न सामग्रीलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ: मैले मुक्ति पाएको दिनदेखि म के कस्ता कुराहरूका भागीदार बनेको छु — २१५ ओटा सत्यताहरू] एउटा विश्वासीले यसरी जवाफ दिए, “हजुरचाहिँ केवल दोस्रो आशिषमा पुग्नुभयो? कठै!”
विश्वासीहरू कत्तिको आशिषवान् पारिएका छन्? ख्रीष्ट गरिब बन्नुभयो, उहाँमा हामी धनवान् बन्न सकौं भनेर (२ कोरिन्थी ८:९)। पवलले आत्मिक समस्याहरूले जेलिएका कोरिन्थीहरूलाई यसरी लेख्‍न सके,
“हरेक कुरामा तिमीहरू उहाँद्वारा धनवान् बनाइएका छौ यसैकारण कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा तिमीहरू कम छैनौ” (१ कोरिन्थी १:५,७)।
विश्वासीहरूलाई भनिएको छ,
“उहाँमा नै तिमीहरू पूर्ण छौ” (कलस्सी २:१०)। [पाठकले अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध Ye are Complete in Him भन्ने अध्ययन पढ्न सक्नुहुन्छ]
यदि हामी ख्रीष्टमा पूर्ण छौं भने हामीमा दोस्रो आशिषको अभाव हुन सक्छ र? बाइबलले रोमी ८:३२ मा परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टको साथमा सबै कुराहरू सित्तैंमा दिइसक्नुभयो भनेर सिकाउँछ। हाम्रो अभाव दोस्रो आशिषको अनुभवको अभाव होइन तर हामीलाई दिइसकेका परमेश्वरको अनुग्रहको धनलाई अपनाउन सक्ने विश्वासको अभाव हो। हामी आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई व्यवहारमा आफ्नो बनाउन चुकिरहेका हुन्छौं।
५) पवित्र आत्मा पाइएको प्रमाण के हो?
आफूले पवित्र आत्मा पाउनुभएको प्रमाण तपाईं कसरी दिनुहुन्छ? हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरूले आफूहरूले अन्य भाषामा बोलेका (“आत्माको बप्‍तिस्मा”) कुरालाई पवित्र आत्मा पाएको प्रमाणस्वरूप औंल्याउँछन्।
तर पवित्र शास्त्रले के भन्दछ?
“तर आत्माको फल हो: प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम” (गलाती ५:२२)।
यदि तपाईंले पवित्र आत्मा साँच्चै पाउनुभएको छ भने के हामीले तपाईंको जीवनमा आत्माको फल देख्‍ने अपेक्षा राख्‍न सक्दैनौं? यदि तपाईं आफूलाई स्याउको बोट भएको दाबी गर्नुहुन्छ भने, स्याउ देखाउनुहोस् न त। यदि तपाईंसँग परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुनुभएको दाबी गर्नुहुन्छ भने आत्माको फल देखाउनुहोस् न त।
“किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो — तिमीहरूको पवित्रता। तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस…किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताका निम्ति होइन, तर पवित्रताका निम्ति बोलाउनुभएको छ। यसकारण जसले यस कुरालाई तुच्छ ठान्छ, त्यसले मानिसलाई होइन, तर परेमेश्वरलाई तुच्छ ठान्छ, जसले हामीलाई आफ्ना पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ” (१ थेस्सलोनिकी ४:३,७,८)।
एक व्यक्तिले पवित्र आत्मा पाएको प्रमाण उसको पवित्र जीवनले नै दिन्छ। यदि मैले पवित्र आत्मा साँच्चै पाएको छु भने के मैले पवित्र जीवन बिताउनुपर्ने होइन र? (तुलना गर्नुहोस् २ तिमोथी २:१९ — “ख्रीष्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस्।”
“अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ” (एफेसी ४:३०)। यदि तपाईंले पवित्र आत्मालाई पाउनुभएको छ र परमेश्वरको सन्तान बन्नुभएको छ भने, आफू प्रभुको अनाज्ञाकारी बन्न पुग्दा र उहाँलाई मन नपर्ने काम गर्न पुग्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? के तपाईंलाई अप्ठेरो महसुस हुँदैन, दोष महसुस हुँदैन, अशान्ति हुँदैन? २ पत्रुस २:७-८ मा बयान गरिएको धर्मी लूतको अवस्थासित तुलना गर्नुहोस्। विश्वासीभित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्माले विश्वासीलाई आफ्नो शोकित उपस्थितिको महसुस दिलाउने काम गर्नुहुन्छ। पापमय जीवन बिताउने व्यक्ति, जसले आफू पापमय जीवन बिताइरहेछु भनेर जान्दछ र त्यसरी नै जिउन रमाउँदछ र त्यहीअनुसारको पापमय जीवन बिताइरहने अभिप्राय राख्दछ, उसभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। पापमा जिउन उसलाई कुनै अप्ठेरो नलाग्नु नै पवित्र आत्मा उसभित्र उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने कुराको प्रमाण हो। [R.Gene Reynolds, Assurance of Salvation, page 73]
६) पवित्र आत्माको भरपूरीको प्रमाण के हो?
आफू पवित्र आत्माले भरपूर हुनुभएको कुरालाई तपाईं कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ?
“मैले अन्य भाषामा बोलेको छु। मैले यस्तो-उस्तो अनुभव गरेको छु।”
गलाती ५:२२ लाई फेरि हेर्नुहोस्। आत्माको भरपूरीको प्रमाण आत्माको फलले देखाउँछ। फल छैन भने भरपूरी पनि छैन।
एफेसी ५:१८ मा हामीलाई आत्माले भरपूर हुन आज्ञा दिइएको छ। सन्दर्भलाई हेर्दा उक्त खण्डले आत्माले भरपूर भएको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने बताइरहेको पाइन्छ। ती पदहरूले यसरी भनिरहेका छैनन्: अनि दाखमद्यले नमात, जसमा चरित्रहीनता हुन्छ; तर आत्माले भरपूर होओ; आपसमा अनौठा उत्तेजित उच्चारणहरूद्वारा बात गर।” होइन, यस खण्डको सन्दर्भमा कतै पनि हामीलाई अन्य भाषाको वरदान नै आत्माको भरपूरीको प्रमाण हो भनी बताइएको छैन। हामीलाई बताइएको कुरा यो छ:
पद १९ – एक संगीतमय हृदय! आत्माले भरपूर विश्वासी आनन्दले भरपूर विश्वासी हो। पवित्र आत्मा निपुण वाद्य वादक हुनुहुन्छ जसद्वारा उहाँको भरोसामा जिउने विश्वासीको हृदयमा मीठो संगीतको उद्‍भव हुँदछ। हेर्नुहोस् १ थेस्सलोनिकी ५:१६।
पद २० – एक धन्यवादी हृदय! आत्माले भरपूर विश्वासी एक धन्यवादी विश्वासी हो। तपाईं धन्यवादी हुनुहुन्न भने तपाईं भरपूर हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् १ थेस्सलोनिकी ५:१८।
पद २१ – एक अधीनमा बस्ने हृदय! अधीनता भेट्टाउन हामी कता हेरौं? दैनिक जीवनका सम्बन्धहरूमा — पति/पत्‍नी, बाबुआमा/छोराछोरी, मालिक/मजदूर इत्यादी। हेर्नुहोस् एफेसी ५:२२-६:९। अधीनमा बस्ने, आत्माले भरपूर विश्वासीलाई भेट्टाउन हामी कता हेरौं? मण्डली सभाको दिनमा होइन जब सबै नै आ-आफ्ना सर्वोत्तम बोलि-व्यवहारलाई पहिरेका हुन्छन्। घरमा क्यारिज्म्याटिक स्तुति-प्रशंसा गरिरहँदा होइन जब सबै नै आत्मिक उत्तेजनामा भएझैं देखिन्छन्। हेर्नुपर्ने सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो विश्वासी जन जिउने उसको दिनचर्याकै बीचमा। मालिकको “मुड” खराब हुँदा ख्रीष्टियन मजदूरको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदछ? दिनभरको कठिनाइपूर्ण कामले थकित भई घर आइपुगेका पतिले आफ्ना पत्‍नी र छोराछोरीसित व्यवहार गर्दा के उनलाई हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हिँडिरहेको देख्‍न पाउँछौं? साँचो कसी त्यो हो।
मण्डली इतिहासबाटको तर्क:
बिगतका विश्वासी भक्तजनहरूलाई विचार गर्नुहोस् जसले निसन्देह: पवित्र आत्माको सामर्थ्य र भरपूरीको अनुभव गरे, तरैपनि उनीहरूले कहिल्यै अन्य भाषाहरूमा बोलेनन्: जोन क्रिसोस्टोम, जोन हस्, मार्टिन लुथर, जोन क्याल्भिन, जर्ज ह्विटफिल्ड, जोन बन्यान, जोनाथन एडवर्डस, जर्ज म्यूलर, रबर्ट मुरे मक्शेन, ड्वाइट एल मूडी, हडसन टेलर, चार्ल्स ह्याडन स्पर्जन, सी एच म्याकिन्टोश आदि जस्ता कैयौं ख्रीष्टियनहरू।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-09 17:18:402020-04-28 14:20:31पवित्र आत्मा पाउनुभयो?